Electromagnetic spectrum [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ် > အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာပညာ > Electromagnetic spectrum
View Full Version : Electromagnetic spectrum
Electromagnetic spectrum အကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာထက် ပိုပြီးသိကြပါတယ်။ အိမ်မှာထွန်းထားတဲ့ မီးလုံးက ထွက်လာတဲ့ အလင်းရောင်ရယ် radio station ကထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့ radio wave တွေရယ် ဟာ electromagnetic spectrm တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ electromagnetic spectrum အကြောင်းမပြောခင် electromagnetic radiation အကြောင်းကိုအရင်ဆွေးနွေးလိုပါတယ်။ electromagnetic radiation ဆိုတာ space ဒါမှမဟုတ် matter ထဲမှာရှိတဲ့ self-propagation wave အမျိုးအစားတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ electromagnetic radiation မှာ electric နဲ့ magnetic components တွေရှိပါတယ်။ electromagnetic radiation တွေဟာသူတို့ရဲ့ frequency တွေပေါ်မူတည်ပြီး သွင်ပြင်လက္ခဏာ အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ frequency များရင် wavelengths တိုပြီး frequency နည်းရင် wavelengths ရှည်ပါတယ်။ electromagnetic radiation တွေကို frequency ပေါ်မူတည်ပြီး radio waves, microwaves, terahertz radiation, infrared radiation, visible light, ultraviolet radiation, X-rays နဲ့ gamma rays စသဖြင့်ခွဲခြားထားပါတယ်။ ၄င်းတို့အနက် radio waces က wavelengths အရှည်ဆုံးဖြစ်ပြီး gamma rays က wavelengths အတိုဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှာကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်တဲ့အလင်းရောင် (visible light) ဟာအနည်းငယ်မျှသောပမာဏသာဖြစ်ပါတယ်။
Electromagnetic spectrum ဆိုတာကတော့ ဖြစ်နိုင်တဲ့ electromagnetic radiation အားလုံးကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ electromagnetic spectrum ဟာ frequency အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ gamma rays လိုမျိုး ionizing radiation တွေနဲ့ frequency အနိမ့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ radio waves တွေလို non-ionizing radiation တွေရဲ့ ကြားထဲမှာရှိပါတယ်။
Electromagnetic waves တွေကိုပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရာဝတ္ထုတွေမှလည်း ထုတ်လွှတ်ကြပါတယ်။ နေ၊ ကြယ် နဲ့ တခြားဂြိုလ်တွေက Electromagnetic waves တွေကိုထုတ်လွှတ်ကြပြီး ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ် တစ်နည်းနည်းနဲ့ သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ သာမန်အားဖြင့် ပိုမိုပူပြင်းတဲ့ ဒါမှမဟုတ် ပိုမိုလျင်မြန်စွာရွေ.လျားနေတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေက စွမ်းအင်ပိုများတဲ့ Electromagnetic waves တွေကိုထုတ်လွှတ်ကြပါတယ်။ Electromagnetic waves ဟာအခြားသော energy ပုံစံတွေလိုပဲ wavelength, amplitude, frequency နဲ့ power စတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေရှိပါတယ်။ Electromagnetic waves တွေကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပုံကို အောက်ပါပုံမှာလေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
γ= Gamma rays, MIR= Mid infrared, HF= High freq.
HX= Hard X-Rays, FIR= Far infrared, MF= Medium freq.
SX= Soft X-Rays, Radio waves, LF= Low freq.
EUV= Extreme ultraviolet, EHF= Extremely high freq., VLF= Very low freq.
NUV= Near ultraviolet, SHF= Super high freq., VF/ULF= Voice freq.
Visible light, UHF= Ultra high freq., SLF= Super low freq.
NIR= Near Infrared, VHF= Very high freq., ELF= Extremely low freq.
Electromagnetic spectrum နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောက်ပါပုံမှာ ပိုမိုရှင်းလင်းစွာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
တစ်ချို့ကလည်း ဒီလိုပုံတွေဆွဲပြီး လေ့လာကြပါတယ်။
Electromagnetic spectrum တွေရဲ့အစီအစဉ်ကို အောက်ပါအတိုင်း လွယ်ကူစွာမှတ်သားနိုင်ပါတယ်။
Very Visible light
Gardens Gamma rays
Electromagnetic spectrum တွေရဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေကို အောက်ပါဇယားမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
&quot;eV&quot; ဆိုတာကတော့ electron-volts ပါ။ atomic physics မှာ energy တိုင်းတာတဲ့အခါသုံးပါတယ်။ Electromagnetic spectrum ကို graph နဲ့ဖော်ပြရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုကျွန်တော် RADIO WAVES အကြောင်းဆက်လက်ဆွေးနွေးပါ့မယ်။ RADIO WAVES ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ နားထောင်နေကျ RADIO နဲ့ဖမ်းယူနိုင်တဲ့ WAVES ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Television, mobile phones, wireless networking နဲ့ radio တွေဟာ RADIO WAVES ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ ပုံမှာကြည့်ပါ။
RADIO WAVES တွေဟာ frequency အနိမ့်ဆုံးနဲ့ wavelengths အရှည်ဆုံး Electromagnetic spectrum ပဲဖြစ်ပါတယ်။ RADIO WAVES တွေဟာ transmitter ပေါ်မူတည်ပြီး wavelengths အမျိုးမျိုးကွဲပြားကြပါတယ်။ RADIO WAVES တွေကို ကြယ်တွေ အာကာသထဲမှာရှိတဲ့ gases တွေစတဲ့ အခြားအရာဝတ္ထုတွေကလည်းထုတ်လွှတ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ အသံလှိုင်း ( Sound waves ) ဟာ RADIO WAVES နဲ့မတူပါဘူး။ Sound waves ဟာရုပ်ဝတ္ထုတွေရဲ့တုန်ခါမှု ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Sound waves ဟာ လေဟာနယ်ဖြစ်တဲ့ space ကိုမဖြတ်သန်းနိုင်ပါဘူး။ လူ့နားကကြားရတဲ့ အသံဟာ 20 hertz to 20,000 hertz frequency အတွင်းရှိပါတယ်။
RADIO WAVES နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောက်ပါပုံမှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
RADIO WAVES တွေကိုအောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပါတယ်။
၁- Long Wave ။ around 1~2 km in wavelength ရှိပါတယ်။
၂- Medium Wave ။ around 100m in wavelength ရှိပါတယ်။ &quot;AM&quot; အမျိုးအစားတွေပါ။
၃- VHF ။ wavelengths of around 2m ရှိတဲ့ &quot;Very High Frequency&quot; တွေပါ။ &quot;FM&quot; radio အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အရပ်ဘက် လေယာဉ်တွေမှာ သုံးပါတယ်။
၄- UHF ။ &quot;Ultra High Frequency&quot; ဖြစ်ပြီး ၁မီတာအောက် wavelengths ရှိပါတယ်။ Police radio communications, television transmissions နဲ့ military aircraft radios တွေမှာ သုံးပါတယ်။
Microwaves တွေဟာအခြေခံအားဖြင့် extremely high frequency radio waves တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်လွှင့်တဲ့ transmitter ပေါ်မူတည်ပြီး အမျိုးမျိုးသော frequency တွေကိုထုတ်လွှင့်ကြပါတယ်။ mobile phone တွေမှာတော့ transmitter chip နဲ့ အင်တင်နာတွေက microwave ကိုထုတ်လွှတ်ပေးပြီး Microwaves မီးဖိုတွေမှာတော့ magnetron ကနေထုတ်လွှင့်ပါတယ်။ ကြယ်တွေကလည်း microwaves တွေထုတ်လွှင့်ပြီး ၄င်း waves များဟာ စကြ၀ဠာလေ့လာရေးမှာအလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။ Microwaves တွေရဲ့ wavelengths ဟာ 1 mm ကနေ 1 m အတွင်းရှိပြီး frequency ကတော့ 0.3 GHz ကနေ 300 GHz ရှိပါတယ်။ Microwaves ထက် wavelengths ပိုရှည် ( frequency ပိုနိမ့် ) တဲ့ Electromagnetic spectrum တွေကို RADIO WAVES လို့ခေါ်ပြီး၊ Microwaves ထက် wavelengths ပိုတို ( frequency ပိုမြင့် ) တဲ့ Electromagnetic spectrum တွေကိုတော့ millimeter waves ဒါမှမဟုတ် terahertz radiation လို့ခေါ်ပါတယ်။
Microwaves တွေကို ရေကအလွယ်တကူစုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Microwaves မီးဖိုတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Microwaves တွေရဲ့ စွမ်းအင်ကို molecules တွေရဲ့တုန်ခါမှုမှတစ်ဆင့် အပူအဖြစ်ပြောင်းလဲ အသုံးပြုပါတယ်။ microwaves တွေကို Bluetooth ကဲ့သို့သော Wireless LAN protocols များ၊ WiMAX ကဲ့သို့သော MAN ( Metropolitan Area Networks ) protocols များ၊ GSM ကဲ့သို့သောmobile phones networks များမှာအသုံးပြုကြပါတယ်။ ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ အချို့သောဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းများမှာလည်း microwaves တွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ၄င်းအပြင် traffic speed camara ၊ automatic slide door ၊ Radar နဲ့ ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေး တွေမှာလည်း microwaves တွေကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။
http://i39.tinypic.com/33m0ak9.jpg http://home.clara.net/darvill/emag/images/mobilephonescreen.jpg http://home.clara.net/darvill/emag/images/SkyMinidish.jpg http://home.clara.net/darvill/emag/images/phonemast.jpg http://home.clara.net/darvill/emag/images/SpeedCamera.jpg http://home.clara.net/darvill/emag/images/radardish.jpg
Microwaves တွေရဲ့ frequency bands တွေကိုအောက်ပါပုံမှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
TERAHERTZ RADIATION ဆိုတာ infrared နဲ့ microwave radiations တွေကြားထဲမှာရှိတဲ့ electromagnetic spectrum တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းကို submillimeter radiation, terahertz waves, terahertz light, T-rays, T-light, T-lux နဲ့ THz စသဖြင့်လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ သာမန်အားဖြင့် 300 gigahertz (3x1011 Hz) မှ3terahertz (3x1012 Hz) frequency အတွင်းရှိပြီး wavelength အားဖြင့် 1 millimeter မှ 100 micrometer အတွင်းရှိပါသည်။ TERAHERTZ RADIATION ဟာ black body radiation ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် အပူချိန် 10 kelvin ကျော်တဲ့အရာဝတ္ထုတိုင်းက ထုတ်လွှတ်ကြပါတယ်။ TERAHERTZ RADIATION ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ကို အောက်ပါပုံများတွင်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
TERAHERTZ RADIATION ဟာ non-ionizing radiation ဖြစ်တဲ့အတွက် X-rays ကဲ့သို့ DNA တွေ ၊ tissue တွေကို ထိခိုက်နိုင်မှုနည်းပါတယ်။ အချို့ frequency ရှိတဲ့ TERAHERTZ RADIATION တွေဟာ သွားတွေရဲ့ 3D imaging တွေမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အထက်ပါဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် TERAHERTZ RADIATION တွေကို ဆေးပညာနယ်ပယ်မှာ အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ TERAHERTZ RADIATION အသုံးပြုပြီးရရှိလာတဲ့ပုံကို အောက်မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
TERAHERTZ RADIATION ရဲ့ဖောက်ထွင်းနိုင်မှုစွမ်းရည်ကို လုံခြုံရေးအတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
http://www.lightsources.org/images/tutorials/thz1.jpg http://www.thznetwork.org/wordpress/wp-content/galleries/THz-Images/images/tlight.jpg http://www.baudys.de/blog/wp-content/uploads/terahertz_scan.jpg
TERAHERTZ RADIATION တွေကို သိပ္ပံပညာလေ့လာရေးနယ်ပယ်၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနယ်ပယ် နဲ့ အချို့သောဆက်သွယ်မှုနယ်ပယ် တွေမှာအသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ TERAHERTZ RADIATION ရဲ့စုပ်ယူခံရနိုင်မှုကြောင့် aircraft to satellite နဲ့ satellite to satellite ကဲ့သို့သောအမြင့်မျိုးမှာသာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
INFRARED (IR) radiation ဆိုတာ Electromagnetic radiation ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ wavelengths ဟာ visible light ထက်ရှည်ပြီး terahertz radiation ထက်တိုပါတယ်။ Infrared radiation ရဲ့ wavelengths ဟာ 750 nm မှ 1 mm အတွင်းရှိပါတယ်။ ပူပြင်းတဲ့အရာဝတ္ထုတွေက Infrared ထုတ်လွှတ်တဲ့အတွက် Infrared radiation ကိုအပူအဖြစ်အလွယ်တကူမှတ်သားလို့ရပါတယ်။ Infrared radiation တွေကို ကြယ်တွေ၊ မီးအိမ်တွေ၊ မီးတောက်တွေနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ခန္ဓာကိုယ် အပါအ၀င် ပူနွေးတဲ့အရာဝတ္ထုတိုင်းက ထုတ်လွှတ်ကြပါတယ်။ သာမန်အပူချိန်ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ 10 micrometres wavelengths ရှိတဲ့ IR radiation တွေကိုထုတ်လွှတ်ကြပါတယ်။
IR radiation တွေကို အရာဝတ္ထုအမျိုးမျိုးက wavelengths အမျိုးမျိုးနဲ့ထုတ်လွှတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အာရုံခံကိရိယာများကိုတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အပိုင်းအခြားအတွင်းမှာရှိတဲ့ wavelengths အသီးသီးအတွက်ပဲထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့နယ်ပယ်အပေါ်မှာမူတည်ပြီး IR radiation ရဲ့ wavelengths တွေကိုအမျိုးမျိုးပိုင်းခြားသတ်မှတ်ကြပါတယ်။ International Commission on Illumination (CIE) ကတော့ အောက်ပါအတိုင်း bands သုံးခုခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပါတယ်။
*IR-A: 700 nm–1400 nm
*IR-B: 1400 nm–3000 nm
*IR-C: 3000 nm–1 mm
အခြားနယ်ပယ်များမှာလည်း အသုံးပြုတဲ့ wavelengths ပေါ်မူတည်ပြီး IR radiation တွေကို bands အမျိုးမျိုး ခွဲခြားသတ်မှတ်ကြပါတယ်။ IR radiation တွေကို စစ်ဘက်မှာရော အရပ်ဘက်မှာပါတွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြပါတယ်။ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအနေနဲ့ ပစ်မှတ်ခြေရာခံခြင်း၊ ကင်းထောက်ခြင်း၊ ညကြည့်ကိရိယာများ၊ အာရုံခံလိုက်ခြင်းများ စတဲ့အနေအထားလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ အရပ်ဘက်မှာတော့ thermal efficiency analysis, remote temperature sensing, short-ranged wireless communication, spectroscopy, နဲ့ weather forecasting တွေမှာအသုံးပြုပါတယ်။ ၄င်းအပြင် Climatology၊ Astronomy၊ Art history၊ Biological systems၊ Photobiomodulation နဲ့ Health hazard စတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာလည်းအသုံးပြုကြပါတယ်။
http://home.clara.net/darvill/emag/images/SecurityLight.jpg ပုံပါ security light မှ detector ဟာသင့်ခန္ဓာကိုယ်မှ IR radiation ကိုအာရုံခံမှာဖြစ်ပါတယ်။
http://home.clara.net/darvill/emag/images/IRremotePhoneCam.jpg TV remote control တွေဟာလည်း IR radiation ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။
http://img252.imageshack.us/img252/6105/picture7u.jpg ဒါကတော့ Active-Infrared Night Vision ပါ
http://home.clara.net/darvill/emag/images/nakedsciIRwebcam.jpg IR camera ပါ။ မိမိဘာသာ IR camera တစ်ခုပြုလုပ်ပြီးစမ်းသပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာလေး (http://www.thenakedscientists.com)မှာသွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
http://img268.imageshack.us/img268/4565/picture6zq.jpg ဒါကတော့ IR နဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ image တွေပါ။
လူ၏အမြင်အာရုံကိုလာရောက်ရိုက်ခတ်နိုင်သော တနည်းအားဖြင့်လူ၏မျက်စေ့ဖြင့်မြင်နိုင်သော electromagnetic radiation ကို visible light ဟုခေါ်ပါတယ်။ visible light ကို visible spectrum၊ optical spectrum ဒါမှမဟုတ် light (အလင်း) စသဖြင့်လည်းခေါ်ကြပါသေးတယ်။ သူ့ရဲ့ wavelengths ကတော့ သာမန်အားဖြင့် 380 ကနေ 750 nm အတွင်းရှိပါတယ်။ အလင်းဟာ အနီအောက်ရောင်ခြည် (infrared) နဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (ultraviolet) တို့ရဲ့ကြားမှာရှိပါတယ်။ အလင်းကို ပိုးစုန်းကျူးတွေကစပြီး လျှပ်စစ်မီးသီးတွေကနေ ကြယ်တွေ နေတွေ စတာတွေကထုတ်လွှတ်ကြပါတယ်။
အလင်းရောင်ကို သူ့ရဲ့ရောင်စဉ်များအပေါ်မူတည်ပြီး ထပ်မံခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်းနီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ အိုက်ဆက်နယူတန် ( Isaac Newton ) ကအလင်းကိုရောင်စဉ် ၇ မျိုးအဖြစ်ပထမဆုံးခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ နယူတန်မတိုင်ခင် ၄ ရာစုလောက်ကတည်းက ရော်ဂျာဘေကွန် ( Roger Bacon ) ကအလင်းမှရောင်စဉ်များခွဲဖြာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ရောင်စဉ် ၇ မျိုးကိုအောက်ပါအတိုင်းအမျိုးမျိုးမှတ်သားကြပါတယ်။
Richard Of York Gave Battle In Vain = Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo, Violet
ခင် မေ ပျို စိန် ၀တ် လာ နော် = ခရမ်း မဲနယ် အပြာ အစိမ်း အ၀ါ လိမ္မော် အနီ
ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့ မဲနယ် (indigo) ကို အလင်းရဲ့ရောင်စဉ်အဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း မပြုတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အလင်းရဲ့ရောင်စဉ်ဟာ ၆ မျိုးသာရှိပါတော့တယ်။ ဒါကတော့အလင်းရဲ့ရောင်စဉ်ကို မှတ်သားခွဲခြားထားပုံပါ။
အလင်းရဲ့ရောင်စဉ်ပေါ်မူတည်ပြီး wavelengths ကွာခြားပုံကိုအောက်မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အလင်းရောင်ဟာ အရာဝတ္ထုတွေကိုမြင်စေရန်အတွက်အဓိကအသုံးဝင်ပါတယ်။ ၄င်းအပြင် အလင်းကို လေဆာ (laser) ရောင်ခြည်ထုတ်လုပ်ရာမှာလည်းအသုံးပြုပါတယ်။ လေဆာရောင်ခြည်ကို CD နဲ့ DVD တွေပြုလုပ်ရာမှာအသုံးပြုပါတယ်။
laser printers နဲ့ aircraft weapon aiming systems တွေမှာလည်း လေဆာရောင်ခြည်ကို အသုံးပြုကြပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ရုံက projector တွေနဲ့တခြားမီးလုံးတွေမှာလည်းအလင်းစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုရပါတယ်။
http://home.clara.net/darvill/emag/images/08porthole.jpg http://home.clara.net/darvill/emag/images/BulbLit60W.jpg http://home.clara.net/darvill/emag/images/Redhead-400px.jpg
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် Ultraviolet (UV) ဆိုတာ အလင်းထက် wavelength တိုပြီး x-rays ထက် wavelength ရှည်တဲ့ electromagnetic spectrum ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ wavelength ဟာ 400 nm ကနေ 10 nm အတွင်းရှိပြီး energy အားဖြင့်3eV ကနေ 124 eV အတွင်းရှိပါတယ်။ သူ့မှာ အလင်းရဲ့ခရမ်းရောင်စဉ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ frequency ရှိတာကြောင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်လို့ခေါ်ဆိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နေဟာခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ထုတ်လုပ်တဲ့အဓိက အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကြယ်တွေနဲ့ အာကာသအတွင်းရှိအခြားပူပြင်းသော အရာဝတ္ထုတွေ ကလည်း ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကိုထုတ်လွှတ်ကြပါတယ်။
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ကိုလည်း နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ထပ်မံခွဲခြားသတ်မှတ်ကြပါတယ်။ အောက်ပါပုံမှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အချို့အင်းဆက်တွေဟာ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်ပန်းပွင့်တွေကို မကြာခဏတွေ့မြင်ဖူးကြမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့အမြင်မှာတော့ အားလုံးဟာအဖြူရောင်တွေပါပဲ။ တကယ်တော့အဲ့ဒီပန်းပွင့်တွေမှာ အနည်းငယ်ကွဲပြားတဲ့ ရောင်စဉ်တွေရှိပါတယ်။ သူတို့ဆီကအလင်းပြန်လာတဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ကိုကြည့်ပြီး ပျားကဲ့သို့သော အင်းဆက်တွေဟာ ကွဲပြားတဲ့အရောင်တွေကိုမြင်နိုင်ကြပါတယ်။
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ကိုအမျိုးမျိုးသောနယ်ပယ်တွေမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ Security ၊ Forensics ၊ Fluorescent lamps ၊ Astronomy ၊ Hunting ၊ Biological surveys and pest control ၊ Spectrophotometry ၊ Sanitary compliance ၊ Air purification ၊ Analyzing minerals ၊ Authentication ၊ Chemical markers ၊ Photochemotherapy ၊ Phototherapy ၊ Photolithography ၊ Checking electrical insulation ၊ Sterilization ၊ Disinfecting drinking water ၊ Food processing ၊ Fire detection ၊ Herpetology ၊ Curing of electronic potting resins ၊ Curing of inks, adhesives, varnishes and coatings ၊ Deterring substance abuse in public places ၊ Sun tanning ၊ Erasing EPROM modules ၊ Preparing low surface energy polymers ၊ Reading otherwise illegible papyruses ၊ Lasers ၊ UV solar cells and UV degration of solar cells စတာတွေဟာ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကိုအသုံးပြုတဲ့နယ်ပယ်များဖြစ်ပါတယ်။
http://sohowww.nascom.nasa.gov/classroom/images/image072.gif ဒါကတော့ Extreme ultraviolet Imaging Telescope နဲ့ နေကိုမြင်ရတဲ့ပုံပါ။
http://i44.tinypic.com/2qxlqft.jpg http://science.hq.nasa.gov/kids/imagers/ems/uvEarth_ap16.jpg ဒါကတော့ Apollo 16 လပေါ်ရောက်တုန်းက ရိုက်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာရဲ့ ultraviolet photograph တွေပါ။
http://home.clara.net/darvill/emag/images/InsectoCutor.jpg အင်းဆက်ပိုးမွှားတွေကိုဖမ်းတဲ့ Ultra-Violet lamp ပါ။
http://science.hq.nasa.gov/kids/imagers/ems/iue.gif NASA ရဲ့ Extreme Ultraviolet Explorer satellite ဖြစ်ပါတယ်။
X-RAYS ကတော့ X-radiation ဒါမှမဟုတ် Röntgen radiation လို့ခေါ်တဲ့ electromagnectic radiation တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ wavelength က 10 ကနေ 0.01 nanometers အတွင်းရှိပြီး frequencies အနေနဲ့ 30 petahertz ကနေ 30 exahertz (30 × 1015 Hz to 30 × 1018 Hz) ရှိကာ energies ကတော့ 120 eV မှ 120 keV အထိရှိပါတယ်။
X-Rays တွေကို နေ၊ ကြယ်တွေနဲ့ စကြ၀ဠာထဲမှာရှိတဲ့ ပူပြင်းတဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေကထုတ်လွှတ်ကြပါတယ်။ X-Rays machine ကနေ X-rays ထုတ်လွှတ်ပုံကိုအောက်ပါပုံမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
X-Rays တွေဟာ များပြားတဲ့ စွမ်းအင်နဲ့ တိုတောင်းတဲ့ wavelength ရှိပြီး သင့်ကိုယ်ခန္ဓာကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကြွက်သားတွေကိုဖြတ်သန်းသွားနိုင်ပေမဲ့ Calcium မြောက်မြားစွာပါဝင်တဲ့ သင့်ရဲ့ အရိုးတွေကိုတော့ မဖြတ်သန်းနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်သင့်သွားနဲ့ အရိုးတွေကိုကြည့်ရှုဖို့ ဆရာဝန်တွေဟာ X-Rays ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ X-Rays ကိုဆေးပညာနယ်ပယ်မှာတော့ ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုကြပါတယ်။ အခြားနယ်ပယ်အမြောက်အမြားမှာလည်း X-Rays ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ လေယာဉ်ကွင်းလုံခြုံရေး အတွက် အိတ်တွေစစ်ဆေးရာမှာလည်းကောင်း၊ နတ္ခတ်တာရာတွေလေ့လာရာမှာ လည်းကောင်း X-Rays တွေကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။
ဒါကတော့ X-Rays နဲ့အပင်တွေကိုမြင်ရတဲ့ပုံပါ။
ဒါကတော့ X-Rays နဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေကို မြင်ရတဲ့ပုံပါ။
ဒါကတော့ X-Rays နဲ့ မြင်ရတဲ့ အင်းဆက်ပါ။
http://desmond.imageshack.us/Himg802/scaled.php?server=802&filename=picture15g.png&res=medium ဒါကတော့ ဂဏာန်းပေါင်းစက်ပါ။
http://science.hq.nasa.gov/kids/imagers/ems/filling.jpg ဒါကသွားတွေကို မြင်ရတဲ့ပုံပါ။
http://science.hq.nasa.gov/kids/imagers/ems/latest_sxt.jpg ဒါကနေကို X-Rays နဲ့ မြင်ရပုံပါ။
Gamma-rays ကတော့ energy အမြင့်ဆုံး 100 keVခန့် ၊ frequency အမြင့်ဆုံး (10) Hz နဲ့ wavelength အတိုဆုံး 10 picometers အောက်ရှိတဲ့ electromagnetic radiation တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Gamma-rays တွေကို Radioactive materials တွေနဲ့ ကြယ်တွေမှထုတ်လွှတ်ပါတယ်။ Gamma-rays တွေဟာ Electromagnetic spectrum တွေထဲမှာ စွမ်းအင်အများဆုံးဖြစ်ပြီး စကြ၀ဠာရဲ့ အပူပြင်းဆုံးအပိုင်းတွေကနေ ထုတ်လွှတ်ပါတယ်။
Gamma-rays တွေဟာ စွမ်းအင်အများဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက် materials အများစုကိုဖောက်ထွက်ဖြတ်သန်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သတ္တုတွေထဲက အပြစ်အနာအဆာတွေကြည့်ရှုရာမှာ Gamma-rays ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Gamma-rays ကို VACIS (Vehicle and Container Imaging System) မှာလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အောက်ပါပုံကတော့ VACIS နဲ့ truck ရဲ့အတွင်းရှိအရာဝတ္ထုများကိုပုံဖော်ထားတာပါ။
http://science.hq.nasa.gov/kids/imagers/ems/moon_egret.jpg ဒါကတော့ Gamma-rays နဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ လ ရဲ့ပုံရိပ်ပါ။
Gamma rays နဲ့ X-Rays တို့ဟာ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ထို့အတူ Gamma rays ဟာ ကင်ဆာပိုးတွေကိုသတ်နိုင်ပါတယ်။ Gamma rays ထိမှန်ထားတဲ့ ကင်ဆာဆဲလ်တွေဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့ပြန်လည်မပြုပြင်နိုင်ကြပါဘူး။ ဒါကို&quot;Radiotherapy&quot; လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ လူနာတစ်ယောက်ရဲ့ အဆုပ်အတွင်းကို Gamma rays ကင်မရာနဲ့တွေ့မြင်ရပုံပါ။
Gamma rays နဲ့ ကြာရှည်ခံအောင်လုပ်ထားတဲ့ အစားအစာတွေကိုတော့ &quot;irradiated&quot; food လို့ခေါ်ပါတယ်။
medical equipment တွေကို sterilise လုပ်ရာမှာလည်း Gamma rays ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။
ကျွန်တော် Electromagnetic spectrum အကြောင်းနဲ့ Electromagnetic spectrum မှာပါဝင်တဲ့ ရောင်စဉ်အမျိုးမျိုးအကြောင်းကို အကြမ်းဖျဉ်း မိတ်ဆက်ပေးပြီးပါပြီ။ အခုဆက်ပြီး Electromagnetic spectrum နဲ့ပတ်သက်လို့ မရှင်းမလင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတချို့ကို ဆွေးနွေးသွားပါမယ်။
Radio Wave ဆိုတာ Gamma-Ray ပဲလား၊ Microwave ကရော X-ray နဲ့တူတူပဲလား၊ မတူဘူးလား.....
radio waves တွေဟာ gamma-rays တွေနဲ့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေ ဒါမှမဟုတ် ရောင်စဉ်လှိုင်းတွေ လို့ ကျွန်တော်တို့ တွေးမိကောင်းတွေးမိကြလိမ့်မယ်။ ဒီလှိုင်းတွေကို သက်ဆိုင်ရာနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ထုတ်လုပ်နိုင်သလို ကျွန်တော်တို့အပေါ်လာရောက်ထိတွေ့ပုံ၊ အသုံးပြုနိုင်ပုံတွေဟာလည်း အမျိုးမျိုးကွဲပြားကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ဟာတယ်ပဲ ကွဲပြားခြားနားတဲ့အရာတွေလားဆိုရင်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Radio waves, visible light, X-rays နဲ့ အခြားသော Electromagnetic spectrum တွေဟာအခြေခံအားဖြင့် တူညီတဲ့ electromagnetic radiation တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Electromagnetic radiation တွေကို photons တွေရဲ့ စီးဆင်းမှုအဖြစ်မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ photons ဆိုတာ ဒြပ်ထုမဲ့ အမှုန်အမွှားလေးတွေဖြစ်ပြီး အလင်းအလျင်နဲ့ ရွေ့လျားနိုင်ကာ လှိုင်းပုံစံအတိုင်းသွားလာကြပါတယ်။ photon တိုင်းမှာ သက်ဆိုင်ရာပမာဏရှိတဲ့ energy တွေရှိပါတယ်။ electromagnetic radiation အားလုံးမှာလည်း photons တွေပါဝင်ပါတယ်။ electromagnetic radiation တွေကြား အဓိကကွာခြားချက်ကတော့ photons တွေမှာပါဝင်တဲ့ energy ပမာဏပဲဖြစ်ပါတယ်။ Radio waves တွေမှာ energy ပမာဏနည်းတဲ့ photons တွေ ပါဝင်ကြပြီး microwaves မှာတော့ energy အနည်းငယ်ပိုများတဲ့ photons တွေရှိပါတယ်။ infrared မှာ energy ပိုမိုများလာပြီး visible light, ultraviolet, X-rays စသဖြင့် energy ပိုမိုများပြားလာကာ gamma-rays တွေကတော့ energy အများဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် electromagnetic spectrum တွေကိုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ တိုင်းတာဖော်ပြကြတာလဲ
တကယ်တော့ electromagnetic spectrum တွေကို energy, wavelength, ဒါမှမဟုတ် frequency နဲ့ ဖော်ပြတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်နည်းလမ်းနဲ့ဖော်ပြသည်ဖြစ်စေ သတ်မှတ်တိုင်းတာတဲ့ပမာဏများဟာ သင်္ချာနည်းလမ်းအရကြည့်ရင်တော့ အတူတူပါပဲ။ frequency ကို cycles per second ( Hertz ) ဖြင့်လည်းကောင်း ၊ wavelength ကို meters ဖြင့်လည်းကောင်း ၊ energy ကို electron volts ဖြင့်လည်းကောင်း တိုင်းတာဖော်ပြ ကြပါတယ်။
သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ မိမိအသုံးပြုလုပ်ကိုင်တဲ့အခြေအနေအပေါ်မူတည်၍လည်းကောင်း၊ ပိုမိုရှင်းလင်းလွယ်ကူမှုအပေါ် မူတည်၍လည်းကောင်း နည်းစနစ်များကိုရွေးချယ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ radio astronomy နယ်ပယ်မှာဆိုရင် astronomers တွေဟာ wavelength ဒါမှမဟုတ် frequency ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ electromagnetic spectrum တွေထဲမှာ radio waves ရဲ့အတိုင်းအတာက wavelength အနေနဲ့ 1 cm မှ 1 km (frequency အနေနဲ့ 30 gigahertz (GHz) ကနေ 100 kilohertz (kHz)) အတွင်းမှာရှိပါတယ်။ radio waves ဟာ electromagnetic spectrum ရဲ့ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Infrared astronomers တွေကလည်း wavelength ကိုပဲအသုံးပြုကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ electromagnetic spectrum ရဲ့ 1 to 100 microns အတွင်းမှာရှိတဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ wavelength တွေကို microns တွေနဲ့ဖော်ပြကြပါတယ်။ အလင်းရောင်ကိုအသုံးပြုတဲ့ Optical astronomers တွေကလည်း wavelength ကိုတွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ angstroms (0.00000001 cm) နဲ့ nanometers (0.0000001 cm or 0.000000001 meters) တို့ကိုလည်း အသုံးပြုကြပါတယ်။ အလင်းရဲ့ရောင်စဉ်တွေဖြစ်တဲ့ ခရမ်း၊ အပြာ၊ အစိမ်း၊ အ၀ါ၊ လိမ္မော်၊ အနီ တို့ရဲ့ wavelength တွေဟာ 400 ကနေ 700 nanometers အတွင်းရှိပါတယ်။ ultraviolet, X-ray, နဲ့ gamma-ray တို့ရဲ့အပိုင်းမှာတော့ wavelength ဟာဖော်ပြဖို့အလွန်သေးငယ်သွားပါပြီ။ ဒါကြောင့် သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ သူတို့မှာပါဝင်တဲ့ photons တွေရဲ့ energy ကို electron volts အဖြစ် ဖော်ပြသုံးစွဲလာကြပါတယ်။ Ultraviolet radiation ဟာ 100 eV ပမာဏရှိတဲ့ အနည်းငယ်မျှသော စွမ်းအင်ပမာဏရှိပါတယ်။ X-ray photons တွေရဲ့ energy ကတော့ 100 eV ကနေ 100,000 eV ( 100 keV) အတွင်းရှိပြီး Gamma-rays တွေရဲ့ photons energy ကတော့ 100 keV ထက်ပိုများပါတယ်။
ဘာကြောင့် electromagnetic spectrum အားလုံးကိုအာကာသထဲမှသာမြင်နိုင်ရတာလဲ
အာကာသကရောက်ရှိလာတဲ့ Electromagnetic radiation တွေထဲမှ အနည်းငယ်သော wavelength အတွင်းမှာရှိတဲ့ visible spectrum, radio frequencies, နဲ့ အချို့သော ultraviolet wavelengths တွေကသာ ကမ္ဘာ့မြေမျက်နှာပြင်ပေါ် ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့လေထုဟာ electromagnetic spectrum တွေကိုအဓိကဟန့်တားစုပ်ယူပါတယ်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှအမြင့်ပေါ်မူတည်ပြီး Electromagnetic radiation တွေရဲ့ ကမ္ဘာ့မြေမျက်နှာပြင်ပေါ် ရောက်ရှိနိုင်မှုကိုအောက်ပါပုံများမှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Astronomers တွေဟာ အချို့သော wavelengths အတွင်းရှိတဲ့ infrared တွေကို ကမ္ဘာ့လေထုမှ တစ်စုံတစ်ခုသောကင်းလွတ်မှုရှိတဲ့ တောင်ထိပ်တွေ၊ ပျံသန်းနေတဲ့ လေယာဉ်တွေပေါ်မှသာ တိုင်းတာလေ့လာမှုပြုနိုင်ပါတယ်။ လစဉ်လေ့လာမှုတွေကို ပျမ်းမျှ 35 km အမြင့်လောက်အထိ မိုးပျံပူဖောင်းတွေ လွှတ်တင်ပြီးတော့လည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒုံးပျံလွှတ်တင်တဲ့အခါမှာလည်း တိုင်းတာရေးကိရိယာတွေကိုထည့်သွင်းလွှတ်တင်ပြီး လေ့လာမှုပြုနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့လေထုမှ လွတ်ကင်းပြီးမြေပြင်ပေါ်ပြန်မကျမီ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း တိုင်းတာရရှိမှုတွေဟာ များစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ကမ္ဘာပတ်ဂြိုလ်တု (orbiting satellite ) တွေလွှတ်တင်ပြီးလေ့လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
Electromagnetic spectrum တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့သမျှမှာ အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ကျန်နေပါသေးတယ်။ ဒါကတော့ လူ့ကျန်းမာရေးအပေါ် Electromagnetic spectrum တွေရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုပါပဲ။ လူနေမှုအဆင့်အတန်းတိုးတက်မြင့်မားလာတာနဲ့အမျှ လူမှုလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ electronic ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို တီထွင်ထုတ်လုပ်လာကြပါတယ်။ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေ၊ ကွန်ပြူတာတွေ၊ ရုပ်မြင်သံကြားစက်တွေက စပြီး စွမ်းအားမြင့် transmission stations ကြီးတွေ၊ electricity pylons တွေနဲ့ overhead power lines အထိ ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။ ဒီလို electric နဲ့ electronic ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုမှုများပြားလာခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ electromagnetic radiation တွေပိုမိုများပြားလာစေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးအပေါ် ကျရောက်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ကလည်းပိုမိုတိုးတက်မြင့်မားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ယခုနောက်ပိုင်းထုတ်လုပ်မှုတွေမှာ လုံခြုံဘေးကင်းမှုအပေါ် သတ်မှတ်အကဲဖြတ်ချက်တွေပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ ထုတ်ကုန်တွေကထွက်ရှိတဲ့ electromagnetic waves တွေရဲ့ အချိုးအစားဟာ သတ်မှတ်စံနှုန်းများနဲ့ ညီမညီ သုံးစွဲသူတွေအပေါ်ဘေးကင်းမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်လာကြပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင် Federal Communications Commission (FCC)၊ American National Standards Institute (ANSI) နဲ့ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေက ၄င်းစံနှုန်းများလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးမှာ အဓိကပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ SAR = Specific Absorption Rate ကိုအဓိကထားသတ်မှတ်ကြပါတယ်။ SAR ဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တစ်သျှူးတွေကနေ အပူစုပ်ယူမှုပမာဏပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့မှာတော့ SAR ကို ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဧရိယာတစ်ခုအတွင်း အပူချိန်တိုးတက်လာတဲ့ပမာဏကိုတိုင်းတာယူပါတယ်။ FCC ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကတော့ လူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ 20cm အတွင်း SAR တန်ဖိုးဟာ 1.6 W/kg ထက်မကျော်စေရပါဘူး။ ဒါကြောင့် မိုဘိုင်းဖုန်းတွေရဲ့ ခွင့်ပြုတဲ့ SAR တန်ဖိုးဟာ 1.6 W/kg ဖြစ်ပါတယ်။
များပြားတဲ့ Radio waves ပမာဏနဲ့ထိတွေ့မှုမှတစ်ဆင့် ကင်ဆာ၊ လူကေးမီးယားနဲ့ အခြားသော ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်မှုအချို့ကို ရရှိခံစားရနိုင်ပါတယ်။ သင့် အိမ်အနီးကဖြတ်သွားတဲ့ overhead power cables တွေဟာလည်းသင့် ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
သင့် မျက်စေ့ကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်တဲ့ microwaves တွေဟာမျက်စေ့တိမ်စွဲခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် microwaves မီးဖိုတံခါးနားသွားပြီး အစာတွေကျက်မကျက်သွားကကြည့်ဖို့ သတိပြုရပါမယ်။ လတ်တလောလူသိများနေတဲ့ ကိစ္စကတော့ မိုဘိုင်းဖုန်းက ထွက်လာတဲ့ microwaves တွေဟာ သင့် ဦးနှောက်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဖုန်းကြာရှည်ပြောတတ်သူများသတိထားဖို့လိုပါတယ်။ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေအတွက် microwaves ကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ဝတ်စုံတွေထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ခေတ်ပေါ်တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်တွေမှာပါတဲ့ စွမ်းအားမြင့် ရေဒါတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ကာကွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Infra-Red radiation ရဲ့လူတွေအပေါ်ထိခိုက်မှုကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ အလွန်အကျွံထိတွေ့မှုများလာရင် အပူလောင်ပါမယ်။
စူးရှတဲ့ အလင်းရောင်ကလည်းသင့်မျက်စေ့ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်နေကဲ့သို့ တောက်ပတဲ့အလင်းရောင်ကိုတိုက်ရိုက်နဲ့ ကြာရှည်စွာမကြည့်ဖို့ သတိပြုရပါမယ်။
Ultra-Violet ကလည်း သင့်မျက်စေ့ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်နေကာမျက်မှန် ၀ယ်တဲ့အခါမှာလည်း ရွေးချယ်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဈေးပေါတဲ့ နေကာမျက်မှန်အများစုဟာ Ultra-Violet ကိုမကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။ နေကာမျက်မှန်တပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ သူငယ်အိမ်ဟာကျယ်သွားပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်မျက်မှန်ဟာ Ultra-Violet ကိုမကာကွယ်နိုင်ဘူးဆိုရင် မျက်မှန်မတပ်ထားတာထက်ပိုပြီး သင့်မျက်စေ့ကိုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်နေကာမျက်မှန် ၀ယ်တဲ့အခါမှာ Ultra-Violet ကိုကာကွယ်နိုင်ကြောင်းသေချာတာကိုရွေးဝယ်ဖို့လိုပါတယ်။ ၄င်းအပြင် Ultra-Violet ဟာ အရေပြားကင်ဆာကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့လေထုထဲက အိုဇုန်းလွှာတွေဟာ Ultra-Violet ကိုအဓိကစုပ်ယူပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ အိုဇုန်းလွှာပါးလွှာလာခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူတွေစိတ်ဝင်တစားဖြစ်ခဲ့ကြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
X-Rays ကတော့ ဆဲလ်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး ကင်ဆာရောဂါကိုပါဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးရုံက ဓာတ်မှန်ခန်းတွေကိုလုံခြုံစွာ ကာရံထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကာရံထားရုံနဲ့ မလုံလောက်တဲ့ အတွက် ဓာတ်မှန်ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်း တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။
Gamma rays တွေကလည်း ဆဲလ်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး ကင်ဆာရောဂါကိုပါဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ၄င်းအပြင် ဖွံဖြိုးဆဲ တစ်သျှူးတွေရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေလည်းဖြစ်စေ နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအနေနဲ့ Gamma rays တွေကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။
ဒီခေါင်းစဉ်က ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး electromagnetic emission ,radiation and propagation ကို ခွဲခြား ရပါမယ်။ ရူပဗေဒ သဘောနဲ့ ယူနစ်တွေကိုရှင်းပြတာ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။စုဆောင်းထားစရာအချက်အလက်တွေအများကြီးပါဝင်တယ်လေ။ ;D
ကျွန်တော် ဒီ Electromagnetic Spectrum အကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့တာ အတော်ကြာပါပြီ... အဲ့အချိန်တုန်းကလည်း ဖတ်မိမှတ်မိသမျှကို နားလည်သလိုပြန်လည်မျှဝေဆွေးနွေးခဲ့တာပေါ့ဗျာ... အကြောင်းအရာတစ်ရပ်ဆိုတာကလည်း လေ့လာလေလေ ပိုပြီးကျယ်ပြန့်လေလေပါပဲ.... အရာအားလုံးခရေစေ့တွင်းကျ သိမြင်နားလည်ဖို့ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ဥာဏ်အဆင့်အတန်းနဲ့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တာပါပဲဗျာ.... အခုလည်း ဖတ်ရင်းမှတ်ရင်းထပ်သိလာသမျှလေးတွေကို MEF ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေလည်း ဖတ်မှတ်လေ့လာလို့ရအောင် ဆက်ဆွေးနွေးပေးသွားပါ့မယ်.... အခုဆွေးနွေးမှာကတော့ IR(Infrared) အကြောင်းပေါ့ဗျာ...
IR ကို စတင်တွေ့ရှိသူကတော့ ဂျာမနီနိုင်ငံသား ဂီတနဲ့ နတ္ခတ္တဗေဒပညာရှင် Sir Frederick William Herschel (1738-1822) ဖြစ်ပါတယ်... သူဟာ ၁၇၅၇ မှာတော့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ပြောင်းရွှေ့အခြေချနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်... ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ ညီမဖြစ်သူ Caroline နဲ့အတူ telescopes တွေတည်ဆောက်ပြီး ကောင်းကင်ပြင်ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်... ၁၇၈၁ ခုနှစ်မှာတော့ ယူရေးနပ်စ်ဂြိုလ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနဲ့အတူ နာမည်ကျော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်... ၁၈၀၀ ပြည့်နှစ်မှာတော့ Herschel ဟာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတစ်ခုကို ထပ်မံလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာကွဲပြားခြားနားတဲ့အရောင်တွေအလိုက် အပူဖြတ်သန်းစီးဆင်းမှုပမာဏကို စိတ်ဝင်တစားလေ့လာခဲ့ပါတယ်... နေရောင်ခြည်ကို လေ့လာစူးစမ်းတာကနေ ကွဲပြားတဲ့ရောင်စဉ်တွေအလိုက် သီးခြားပူနွေးမှု အဆင့်များရှိမယ်လို့ ယူဆခဲ့ပါတယ်...
Herschel ဟာ သုံးမြှောင့်ဖန်တုံးကို အသုံးပြုပြီး နေရောင်ကနေ အလင်းရောင်စဉ်တွေခွဲဖြာလာအောင်လုပ်ဆောင်ပါတယ်... ပြီးတော့ အရောင်တစ်ခုစီအလိုက် အပူချိန်ကိုတိုင်းတာရယူပါတယ်.... အဲ့လိုတိုင်းတာရာမှာ အပူကိုပိုမိုစုပ်ယူနိုင်ဖို့ အမည်းရောင်ထိပ်ဖူးရှိတဲ့ အပူချိန်တိုင်းကိရိယာ (Thermometer) သုံးခုကိုအသုံးပြုပါတယ်.... အပူချိန်တိုင်းကိရိယာတစ်ခုကနေ အရောင်တစ်ခုကို တိုင်းတာနေတဲ့အချိန်မှာ အခြားနှစ်ခုက ကပ်လျက်ရှိတဲ့အရောင်များကိုတိုင်းတာယူပါတယ်... အဲ့လိုတိုင်းတာရာမှာ အရောင်အားလုံးဟာ သူ့အောက်မှာရှိတဲ့ အရောင်ထက် အပူချိန်ပိုမိုတာကို သတိပြုမိလာ ပါတယ်... ဆိုလိုတာကတော့ ခရမ်းရောင်ကနေပြီး အပူချိန်တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာရာမှာ အနီရောင်မှာ အမြင့်ဆုံးဖြစ်လာတဲ့သဘောပါ.... ဒီအချက်ကိုသတိပြုမိပြီးတဲ့နောက်မှာ Herschel ဟာ အနီရောင်ရဲ့ အလွန်မှာရှိတဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ နေရာမှာတိုင်းတာကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်.... အဲ့ဒီအခါမှာ ၎င်းအပိုင်းမှာရှိတဲ့အပူချိန်ဟာ တခြားနေရာအားလုံးထက်မြင့်မားနေတာကို အံ့အားသင့်ဖွယ်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်...
Herschel ဟာ အနီရောင်ရဲ့ အလွန်မှာရှိတဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ ဒီရောင်စဉ်ကို “Calorific Rays” လို့နာမည်ပေးပြီး လေ့လာစမ်းသပ်မှုတွေ ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်.... အဲ့လိုလေ့လာခဲ့ရာမှာ ဒီရောင်စဉ်ဟာ အလင်းရောင်လိုပဲ အလင်းပြန်ခြင်း (reflection)၊ အလင်းယိုင်ခြင်း (refraction)၊ စုပ်ယူခံရနိုင်ခြင်း (absorbing) နဲ့ ဖြာထွက်ထုတ်လွှင့်နိုင်ခြင်း (transmitting) စတဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာတွေရှိတယ်ဆိုတာကို ထပ်မံသိရှိလာခဲ့ပါတယ်... Sir William (ကျွန်တော်မဟုတ် :P) ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ အလင်းရောင်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ “Calorific Rays” ကို နောက်ပိုင်းမှာ Infrared လို့နာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်....(infra ဆိုတာကတော့ below လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်)... Herschel ရဲ့ စမ်းသပ်တွေ့ရှိမှုဟာ အနီအောက်ရောင်ခြည် (IR) ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရုံသာမကဘဲ ကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ အလင်းရောင်စဉ်တစ်မျိုးရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကို ပထမဦးဆုံးသက်သေပြနိုင်တဲ့အတွက် အလွန်အရေးပါတဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုဖြစ်လာပါတယ်... ဒီအချက်ကပဲ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်း (EM) ကိုဆက်လက်လေ့လာဖို့ အခြေခံအကျဆုံးအချက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်... Herschel ရဲ့ စမ်းသပ်မှုမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ သုံးမြှောင့်ဖန်တုံးနဲ့ မှန်တွေကိုတော့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့ National Museum of Science and Industry မှာ ပြသထားတယ်လုို့သိရပါတယ်...
အရေးကြီးတဲ့ နေရာတော်တော်များများမှာ လုံခြုံရေးအတွက် X-Ray တွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ အဆင့်အတန်း အမျိုးမျိုးတော့ ရှိနေမယ်ထင်တယ်။
တစ်ချို. Material တွေကို X-Ray က မဖေါက်ထွက်နိုင် ပါဘူး။ ဆိုလိုချင်တာက Box ထဲမှာ သေနတ်တစ်လက်ပါလာတယ် ထားပါတော့ ။ အပြင်ကနေ X-Ray ရိုက်ပေမယ့် မမြင်ရဘူး။ ပိုင်ရှင်ကတော့ သေနတ်တစ်လက်ပါလာတယ် လို. (တရားဝင်သယ်လာတယ်ပေါ့ ) ပြောပါတယ်။
ခက်တာက အဲဒီစက်မှာ မပေါ်ပါဘူး။ စက်ရဲ. အားနည်းချက်လို. ပြောရအောင်လဲ တောက်လျှောက် သုံးနေတာ အကောင်းကြီးပဲ။
သေနတ်ကို တစစီဖြုတ်ထားပြီး သယ်လာတာလဲ မဟုတ်ဘူးနော်။
ကျွန်တော်သိတာက X-Ray တွေကို သုံးတဲ့အခါ Density ကို တိုင်းတယ်လို.တော့ သိထားပါတယ်။ ( မှားရင်လဲ ထောက်ပေးပါ။ ကျွန်တော် ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဘာသာရပ်မဟုတ်ပါဘူး။ )
အဲဒီ Density တိုင်းတဲ့နေရာမှာ သေနတ်ပိုင်ရှင်က ဘယ်လိုလုပ်ထားရင် X-Ray ကို Pass ဖြစ်မလဲပေါ့နော်။ ပါလာတယ်ဆိုတာကိုလဲ ထုတ်ပြပါတယ်။ X-Ray ပြန်ရိုက်တယ် မတွေ.ပြန်ဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ???
ပေါက်ကရတွေရှောက်ပြောနေတာတော့ မဟုတ်ဘူးနော်။ သိတဲ့ဆရာတွေ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန် ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ဗျာ။
X-Rays နဲ့ Terahertz Radiation (T-Rays) တို့ကို လုံခြုံရေးအတွက် အိတ်တွေစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်.... X-Rays က Gamma Rays နဲ့ Ultra Violet ကြားထဲက EM ဖြစ်ပြီး T-Rays ကတော့ Infrared နဲ့ Microwave ကြားထဲက EM ဖြစ်ပါတယ်.... ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ အလင်းရောင်ရဲ့ တစ်ဘက်စီမှာရှိပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ဖောက်ထွင်းနိုင်မှုစွမ်းရည်ကြောင့် နှစ်ခုစလုံးကို အသုံးပြုကြပါတယ်... wavelength အားဖြင့်ဆိုရင် T-Rays ကပိုရှည်ပြီး frequency မှာ X-Rays ကပိုမြင့်ပါတယ်... energy အားဖြင့်ဆိုရင်လည်း X-Rays ကပိုများပါတယ်... ပထမဆုံးစဉ်းစားရမှာက frequency ဒါမှမဟုတ် energy များရင် ဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ပိုများလားဆိုတဲ့ အချက်ပါ... ဒါကိုလည်း အပေါ်မှာ ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေကြည့်ရင် ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်... စွမ်းအင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Gamma Rays ဟာ ဖောက်ထွင်းနိုင်မှုစွမ်းရည် အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက် ယေဘူယျအားဖြင့် စွမ်းအင်ပိုမြင့်ရင် ဖောက်ထွင်းနိုင်မှုစွမ်းရည် ပိုကောင်းတယ်လို့ ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်... (ဒီအချက်မှန်မမှန်ုဆိုတာတော့ ကျွန်တော်အာမ မခံနိုင်ပါဘူး... ပိုမိုတတ်သိနားလည်သူတွေ ဝင်ဆွေးနွေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်) နောက်တစ်ချက်က အသုံးပြုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့... လုံခြုံရေးအတွက် လက်နက်တွေပါမပါ စစ်ဆေးဖို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ ကိရိယာဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီလက်နက်တွေကို ထောက်လှမ်းနိုင်လောက်တဲ့ frequency အပိုင်းအခြားရှိတဲ့ X-Rays ကိုအသုံးပြုထားမှာပါ... ဒါဆိုရင်တော့ ဘာကြောင့်မပေါ်တာလဲဆိုတာကို စဉ်းစားဖို့လိုလာပြီ... စက်ကလည်း ပုံမှန်သုံးနေကျလို့ပြောထားတယ်... ဒါဆို box က X-Rays မဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့ သတ္တုနဲ့လုပ်ထားလို့လား... တခြားကော ဘာအကြောင်းတွေရှိဦးမလဲ... စဉ်းစားစရာတွေက အများကြီး... နောက်တစ်ချက်က သေနတ်ကို စစ်ဆေးတဲ့ အခါမှာသေနတ်ကို ဖောက်ထွင်းသွားရင်လည်း ဘာမှမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်... သူက အိတ်တွေ သေတ္တာတွေကိုပဲ ဖောက်သွားဖို့လိုတာလေ... သေနတ်ကိုတော့ မဖောက်ဘဲနဲ့ ရိုက်ပြီးပြန်လာဖို့လိုမယ်... ပြန်လာတဲ့ လှိုင်းကိုမူတည်ပြီး သေနတ်ပါကြောင်းပုံဖော်ရမှာကိုးဗျ... ဒီနည်းပညာအကြောင်းလည်း ကျွန်တော်တို့ထပ်လေ့လာဖို့လိုဦးမယ်ဗျ... ကိုဇင်မောင်ထွန်းပြောသလိုပဲ ဒါကကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဘာသာရပ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး... ကျွမ်းကျင်တဲ့သိရှိတဲ့သူများဝင်ရောက်ဆွေးနွေးကြပါဦးဗျာ.... ကျွန်တော်လည်း အပေါ်ယံကြောလောက်ပဲသိတာဗျ :4: :4: တကယ်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဆိုရင်တော့ ဟင့်အင်းပဲ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စာပိုဖတ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ.... မေးခွန်းလေးတွေအတွက်ကျေးဇူးပါ သယ်ဂျင်း...
အနီအောက်ရောင်ခြည်ထုတ်လွှတ်ရာ ပင်မရင်းမြစ်ကတော့ အပူ ဒါမှမဟုတ် အပူဓာတ်ဖြာထွက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်... အရာဝတ္ထုတစ်ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ atoms နဲ့ molecules များလှုပ်ရှားမှုကနေ အပူဓာတ်တွေဖြာထွက်လာပါတယ်... အပူချိန်ပိုမြင့်လေလေ အက်တမ်နဲ့ မော်လီကျူးတွေပိုမို လှုပ်ရှားလေလေဖြစ်ပြီး အဲ့လိုလှုပ်ရှားမှုများလေလေ အနီအောက်ရောင်ခြည်ကို ပိုမိုထုတ်လွှတ်လေလေပဲဖြစ်ပါတယ်... ပကတိသုည(absolute zero) အပူချိန် (-459.67 degrees Fahrenheit ဒါမှမဟုတ် -273.15 degrees Celsius ဒါမှမဟုတ်0degrees Kelvin) ထက်မြင့်တဲ့ အပူချိန်ရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုတိုင်းက အနီအောက်ရောင်ခြည်ကို ထုတ်လွှတ်ကြပါတယ်... ပကတိသုညဆိုတာကတော့ အက်တမ်တွေ မော်လီကျူးတွေလှုပ်ရှားရွေ့လျားမှုလုံးဝမရှိတဲ့ အခြေအနေကိုဆိုလိုတာပါ... ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အလွန်အေးမယ်လို့ ထင်ရတဲ့ ရေခဲတုံး လိုအရာဝတ္ထုတွေကအစ အနီအောက်ရောင်ခြည်ကို ထုတ်လွှတ်ကြပါတယ်.... အလင်းရောင်ထုတ်လွှတ်ဖို့မလုံလောက်တဲ့ အရာဝတ္ထုအများစုဟာ အနီအောက်ရောင်ခြည်ကိုတော့ အများအပြားထုတ်လွှတ်လေ့ရှိကြပါတယ်... ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် ပူနွေးနေတဲ့ မီးသွေးခဲများဟာ အလင်းရောင်ကိုမထုတ်လွှတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ ပူနွေးမှုအတိုင်းအတာအလိုက် အနီအောက်ရောင်ခြည်ကို ထုတ်လွှတ်နိုင်ကြပါတယ်... သာမန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ အရာဝတ္ထုက ပူနွေးလေလေ အနီအောက်ရောင်ခြည်ထုတ်လွှတ်မှု ပိုများလေလေပဲဖြစ်ပါတယ်....
ဒီပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အာကာသလွန်းပြန်ယာဉ်ဆင်းသက်မှုမှာ ဘယ်အစိတ်အပိုင်းတွေ ပူပြင်းနေလဲဆိုတာကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်...
သာမန်အပူချိန်ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ လှိုင်းအလျား 10 micro meter ရှိတဲ့ အနီအောက်ရောင်ခြည်တွေကို အများဆုံးထုတ်လွှတ်ပါတယ်... ဒီပုံမှာ အနီရောင်အဖြစ်မြင်ရတဲ့ နေရာတွေဟာ အပူနွေးဆုံးနေရာတွေဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီနောက်ကမှ အဝါ၊ အစိမ်း အစဉ်အတိုင်းသွားပါတယ်... အပြာရောင်ကတော့ အအေးဆုံးအစိတ်အပိုင်းကို ဖော်ပြပါတယ်...
ဒီပုံကတော့ ကြောင်တစ်ကောင်ကနေ အနီအောက်ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုကို ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်... အဝါရောင်/အဖြူရောင်နေရာတွေဟာ အနွေးဆုံးဖြစ်ပြီး ခရမ်းရောင်နေရာတွေဟာ အအေးမြဆုံးဖြစ်ပါတယ်... ဒီပုံကိုကြည့်ရင် အလင်းရောင်မှာမြင်ရတဲ့ မြင်နေကျ ပုံစံမျိုးနဲ့မတူတဲ့ အမြင်တစ်မျိုးကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်... ကြောင်ရဲ့ နှာခေါင်းက အေးပြီး မျက်စိ၊ နားနဲ့ ပါးစပ်တို့က ပူနွေးနေတာကို သတိပြုနိုင်ပါတယ်....
တစ်ချို့တိရိစ္ဆာန်တွေ ဥပမာ ခလောက်မြွေပွေးလို အကောင်တွေဟာ အနီအောင်ရောင်ခြည်ကိုမြင်နိုင်ကြပါတယ်... သူတို့မှာ အနီအောက်ရောင်ခြည်ကို အာရုံခံနိုင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေပါရှိပါတယ်... ဒါကြောင့် သူတို့ဟာ မှောင်ထဲမည်းထဲ တွင်းထဲမှာတောင်မှ သွေးနွေးသတ္တဝါတွေကို ရှာဖွေတွေ့မြင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်... သတ္တဝါတွေက ထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ အနီအောက်ရောင်ခြည်ကို အာရုံခံပြီး သိရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
နေရောင်ခြည်၊ မီးတောက်တွေ၊ အပူပေးကိရိယာတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေ ခံစားသိရှိတဲ့ အပူအများစုဟာ အနီအောက်ရောင်ခြည်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်.... အနီအောက်ရောင်ခြည်ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျက်လုံးတွေက မမြင်နိုင်ပေမဲ့ အရေပြားမှာရှိတဲ့ အာရုံကြောတွေကတော့ ခံစားသိရှိနိုငပါတယ်.... ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အရေပြားမှာ အဆုံးသတ်သွားတဲ့ အပူချိန်အာရုံခံ အာရုံကြောဟာ ကိုယ်တွင်းအပူချိန်နဲ့ အရေပြားပေါ်က ပြင်ပအပူချိန်ကို တိုင်းတာသိရှိနိုင်ပါတယ်....
အပူချိန်ရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုတိုင်းဟာ အနီအောက်ရောင်ခြည်ကို ထုတ်လွှတ်နိုင်ကြပါတယ်... အခြေခံအားဖြင့်တော့ အာကာသအတွင်းမှာရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုတိုင်းဟာ အနီအောက်ရောင်ခြည်အချို့ကို ထုတ်လွှတ်ကြပါတယ်... ထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ အနီအောက်ရောင်ခြည်ရဲ့ လှိုင်းအလျား (Wavelength) ကတော့ ထုတ်လွှတ်တဲ့ အရာဝတ္ထုရဲ့ အပူချိန်ပေါ်မူတည်ပါတယ်... သာမန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ ပိုမိုအေးမြတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဟာ လှိုင်းအလျားပိုရှည်တဲ့ အနီအောက်ရောင်ခြည်တွေကို ပိုမိုထုတ်လွှတ်ကြပါတယ်... ဒါကြောင့် အနီအောက်ရောင်ခြည်ရဲ့ လှိုင်းအလျားပေါ်မူတည်ပြီး လေ့လာအသုံးပြုတဲ့ အရာဝတ္ထုအမျိုးအစားများလည်း ကွဲပြားခြားနားမှာဖြစ်ပါတယ်...
အထက်ပါပုံကတော့ အလင်းရောင်၊ Near IR နဲ့ Mid IR တို့မှာ Horsehead Nebula ကိုတွေ့မြင်ရတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်.. Near IR ၊ Mid IR နဲ့ Far IR တို့မှာ အာကာသအရာဝတ္ထုတွေကို တွေ့မြင်ရမှုကတော့ မတူညီပါဘူး... အရာဝတ္ထုတစ်ချို့ကို ရောင်စဉ်တစ်ခုအတွင်း တွေ့မြင်နိုင်ပေမဲ့ နောက်ရောင်စဉ်တစ်ခုမှာတော့ တွေ့မြင်ချင်မှ တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်... အပေါ်ကပုံမှာဆိုရင် အလင်းရောင်စဉ်နဲ့ Near IR တို့မှာ ဘယ်ရောင်စဉ်က ကြယ်တွေကိုဘယ်လောက်ပုံဖော်နိုင်လဲဆိုတာ တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်... အလင်းရောင်ပုံရိပ်မှာတော့ ကြယ်တစ်ချို့ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး တစ်ချို့ကြယ်တွေကိုတော့ ဖုန်မှုန့်တွေက ကွယ်ထားပါတယ်... Near IR ပုံရိပ်မှာဆိုရင် အာကာသဖုန်မှုန့်တွေကို ဖောက်ထွင်းနိုင်စွမ်းပိုမိုကောင်းပြီး ဖုန်မှုန့်တွေက ကွယ်ထားတဲ့ ကြယ်တွေကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်... Mid IR ပုံရိပ်မှာတော့ ပိုမိုအေးမြတဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေကထုတ်လွှတ်တဲ့ အနီအောက်ရောင်ခြည်တောက်ပမှုကိုပဲ မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်...
အထက်ပါဇယားကတော့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အနီအောက်ရောင်ခြည်အပိုင်းအခြားအလိုက် ဂုဏ်သတ္တိကွဲပြားမှုကို ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်....
Near IR က လှိုင်းအလျား 0.7 ကနေ5မိုက်ခရိုမီတာ အတွင်းရှိပါတယ်... 0.7 ကနေ 1.1 မိုက်ခရိုမီတာ လှိုင်းအလျားရှိတဲ့ အနီအောက်ရောင်ခြည်တွေကို အလင်းရောင်ကိုအသုံးပြုပြီး စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းမှုပြုတဲ့နည်းလမ်းများလိုပဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်... အနီအောက်ရောင်ခြည်က မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တော့ မျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တော့မပါဘူးပေါ့ဗျာ... ဒီအစိတ်အပိုင်းမှာရှိတဲ့ အနီအောက်ရောင်ခြည်ဟာ အပူဖြာထွက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ အပူဓာတ်မဟုတ်ပါဘူး... အပူဓာတ်မဟုတ်တဲ့အတွက် ဒီအစိတ်အပိုင်းကို အနီအောက်ရောင်ခြည်အဖြစ်လည်း အများစုက မသတ်မှတ်ကြပါဘူး.... 1.1 မိုက်ခရိုမီတာအကျော်ကိုရောက်မှသာ အပူဓာတ်ဖြာထွက်မှုများကို အဓိကပြုလုပ်ပါတယ်... အလင်းရောင်ကနေပြီး လှိုင်းအလျား ပိုမိုရှည်လျားလာတာနဲ့အမျှ အနီအောက်ရောင်ခြည်အပိုင်းထဲကို ရောက်ရှိလာပါတယ်.... Near IR ထဲကို ဝင်လာတာနဲ့အမျှ အလင်းရောင်ထဲမှာ ထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရတဲ့ ပူပြင်းတဲ့အပြာရောင်ကြယ်တွေဟာ မှေးမှိန်သွားပြီး ပိုမိုအေးမြတဲ့ ကြယ်တွေဟာ မြင်ကွင်းထဲကို ရောက်ရှိလာပါတယ်... ကြီးမားတဲ့ အနီရောင်ကြယ်ဘီလူကြီးတွေနဲ့ အရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့ အနီရောင်ကြယ်ပုလေးတွေကို ဒီအပိုင်းထဲမှာ အများဆုံးတွေ့မြင်ရပါတယ်... Near IR အပိုင်းဟာ တခြားအနီအောက်ရောင်ခြည်အပိုင်းတွေလိုပဲ အာကာသထဲမှာရှိတဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေကို ဖောက်ထွင်းနိုင်စွမ်းမြင့်မားပါတယ်...
အပေါ်ကပုံတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ Galaxy ရဲ့ အလယ်ဗဟိုကို တွေ့မြင်ရတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်... ဘယ်ဘက်ကပုံကတော့ အလင်းရောင် (visible light) မှာတွေ့မြင်ရတဲ့ပုံဖြစ်ပြီး ထူထဲလှတဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိပါတယ်... ညာဘက်ကပုံမှာတော့ ဖုန်မှုန့်တွေကို ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်ပြီး Near IR မှာတွေ့မြင်ရတဲ့ ပုံဖြစ်ပါတယ်.... အလင်းရောင်ပုံရိပ်မှာတွေ့မြင်ရတဲ့ ပိုမိုပူပြင်းတဲ့ ကြယ်အများစုဟာ Near IR ပုံရိပ်မှာ မှုန်ဝါးသွားပါတယ်... ပိုမိုအေးမြတဲ့ အနီရောင်ရှိတဲ့ ကြယ်တွေနဲ့ အလင်းရောင်ပုံရိပ်မှာမမြင်ရတဲ့ ကြယ်တွေကို Near IR ပုံရိပ်မှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်...
ကျွန်တော်လည်း ကိုဇင်မောင်ထွန်းမေးတာကို သတိရလို့နည်းနည်းလိုက်ရှာဖတ်ကြည့်တယ်ခင်ဗျ.... အဲ့ဒီမှာ X- Rays Screnner.com မှာသိချင်တဲ့အချက်တွေတွေ့ပါတယ်... ကိုဇင်မောင်ထွန်းကြုံရတဲ့ ပြဿနာနဲ့ ကိုက်မကိုက်တော့မသိဘူး... ဘာပဲပြောပြောသိထားရင် အကျိုးရှိပါတယ်... ကိုယ့်ဘာသာဖတ်ရင်လည်းရပေမဲ့ တစ်စုတစ်စည်းထဲဖြစ်အောင် ကျွန်တော်သင့်တော်သလို ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်... မှားတာရှိရင်လည်းခွင့်လွှတ်ကြပါဗျာ....အိတ်တွေ သေတ္တာတွေထဲမှာ လက်နက်ပစ္စည်းတွေ၊ ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေ ပါမပါ X-Rays ကိုအသုံးပြုပြီး ရှာဖွေတဲ့အခါမှာ အိတ်ရဲ့အနေအထား၊ အိတ်တွေရဲ့အကွာအဝေး၊ ကြည့်ရှုတဲ့အနေအထား၊ X-Rays ဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့ ဧရိယာ၊ Clutter ၊ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းကိရိယာတွေ၊ အိတ်အရွယ်အစားကြီးမားမှု စတဲ့ အကြောင်းချင်းရာတွေအများကြီးရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိပါတယ်... ဒါတွေကြောင့် ထိရောက်စွာရှာဖွေနိုင်စွမ်းကလည်း ကွာခြားသွားနိုင်ပါတယ်... အဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့ operator ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုပေါ့ဗျာ... လုံခြုံရေးအတွက်အသုံးပြုတဲ့ဘယ် X-Rays ကိရိယာမဆို အလိုအလျောက်ရှာဖွေ ထောက်လှမ်းဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ စနစ်တွေ မတပ်ဆင်ထားကြပါဘူး... အသုံးပြုတဲ့ လူသားကပဲ စောင့်ကြည့်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပြီး အတည်ပြု ရှာဖွေရတာဖြစ်ပါတယ်... ဒါကြောင့် X-Rays စက်တွေရဲ့ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်တွေ၊ ကန့်သတ်ချက်တွေကို သိရှိနားလည်ထားကြဖို့လိုပါတယ်...
အိတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ လက်နက်ပစ္စည်းတွေဟာ ကြည့်ရှုတဲ့အနေအထား ကွဲပြားမှုအပေါ်မူတည်ပြီး ခွဲခြားစီစစ်ဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်... ဒီလက်နက်တွေကို ဘယ်လိုအနေအထားမျိုးနဲ့ထည့်လာမယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ကခန့်မှန်းလို့မှမရတာ... အဲ့တော့ လက်နက်တွေကို ဘက်ပေါင်းစုံကမြင်ရတဲ့ ပုံစံတွေနဲ့ ရင်းနီးကျွမ်းဝင်နေမှသာ အလွယ်တကူခွဲခြားသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်... ကြီးမားတဲ့ သေနတ်တွေ၊ ဓားတွေတောင်မှ မြင်နေကျအနေအထားမှသာ အလွယ်တကူ တွေ့မြင်သိရှိနိုင်ပါတယ်... အပေါ်တည့်တည့်ကနေဖြစ်ဖြစ် အနားစွန်းကနေဖြစ်ဖြစ်မြင်ရတဲ့အခါမှာတော့ ဘာပစ္စည်းဆိုတာကို အလွယ်တကူမသိရှိနိုင်တော့ပါဘူး... အိတ်တွေကို လှည့်ပြီးစစ်ဆေးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ... ဒါမှရှုထောင့်တစ်မျိုးကနေ မခွဲခြားနိုင်တဲ့အခါမှာ နောက်ရှုထောင့်တစ်မျိုးကကြည့်ပြီး သိရှိခွဲခြားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်... သေနတ်တစ်လက်ကို အပေါ်တည့်တည့်က မြင်ရတဲ့အခါမှာ ၄လက်မလောက်အလျားရှိတဲ့ ထောင့်မှန်စတုဂံပုံ သာမန်အတုံးလေးတစ်တုံးအဖြစ်ပဲ တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်... အခုနောက်ပိုင်းလက်နက်တစ်ချို့ဟာဆိုရင် ၂လက်မ ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲအလျားရှိတာကို သတိပြုရပါမယ်... နောက်တည့်တည့်ကမြင်ရတဲ့အခါမှာလည်း ထောင့်မှန်စတုဂံအတုံးသေးလေးအဖြစ်ပဲ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်... ဓားတွေကိုလည်း အပေါ်တည့်တည့်ကနေဖြစ်ဖြစ်... ထိပ်ကနေဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရတဲ့အခါမှာ ဘာပစ္စည်းဆိုတာ ခွဲခြားသိနိုင်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်... သတ္တုမဟုတ်ဘဲ တခြားပစ္စည်းတွေနဲ့လုပ်ထားတယ်ဆိုရင် ပိုလို့ခွဲခြားဖို့ခက်သွားပါပြီ... ပြီးတော့ X-Rays စက်တွေဟာ သေနတ်တွေ၊ ကြီးမားတဲ့ ဓားတွေကိုသာ ရှာဖွေရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး... 9/11 တိုက်ခိုက်မှု ပြီးကတည်းက လက်သည်းညှပ်တွေ၊ သင်တုန်းဓားတွေ၊ ပလတ်စတစ်ဓားတွေ၊ မီးခြစ်တွေနဲ့ အရည်အမျိုးမျိုးတို့ကိုပါ လေယာဉ်ကွင်းတွေမှာ ရှာဖွေဖော်ထုတ်နေရပါတယ်... ဒီတော့ ဘယ်လက်နက်အမျိုးအစားဆိုတာကို ရုတ်တရက်ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်... လက်နက်ပစ္စည်းတွေထက် ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေက ရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ ပိုခက်ပါတယ်... ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေမှာတိကျတဲ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန်လည်းမရှိပါဘူး... ပြီးတော့ အစိုင်အခဲ၊ အရည်၊ အငွေ့အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပြီး ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ အရွယ်အစားလည်း အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်....
အိတ်ရဲ့အနေအထားကလည်းအရေးကြီးပါတယ်... X-Rays beam ကနေ ရှာဖွေစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ အိတ်ရဲ့အနေအထားရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိပါတယ်... အောက်ခံပြား (conveyor) ပေါ်ကို အိတ်ကိုထောင်လိုက်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင် X-Rays ဖြတ်သန်းဖောက်ထွက်တဲ့ ပမာဏဟာ အနည်းငယ်ပဲရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အပြည့်အဝပုံဖော်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး... ဒါ့အပြင် ဖောက်ထွက်ရတဲ့ ထုကလည်းပိုများနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း ပုံဖော်တဲ့အရည်အသွေးကျဆင်းနိုင်ပါတယ်... ဒါကြောင့် စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ အိတ်ရဲ့ အကျယ်ဆုံးဧရိယာကို X-Rays ဖောက်ထွက်သွားနိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုး ထားရှိပေးသင့်ပါတယ်... ဖောက်ရမယ့်ထုကိုလည်း အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ထားသင့်ပါတယ်... အိတ်ထဲကပစ္စည်းတွေကို ကွဲကွဲပြားပြားမမြင်ရဘူးဆိုရင်တော့ အိတ်ရဲ့အနေအထားကို ပြောင်းပေးရပါမယ်... အိတ်အနေအထားကိုပြောင်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့် X-Rays ဖောက်ထွင်းရတဲ့ ပမာဏ၊ ဖောက်ထွင်းရတဲ့ ထု၊ အရာဝတ္ထုရဲ့ သိပ်သည်းမှု၊ ပစ္စည်းတွေကို တွေ့မြင်ရတဲ့အနေအထား၊ တွေ့မြင်ရတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်စတာတွေအားလုံး ပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်...
X-Raysစက်မှာ စစ်ဆေးနေတဲ့ အိတ်တွေကြားမှာရှိတဲ့ အကွာအဝေးက နီးလွန်းနေရင် စစ်ဆေးတဲ့ပုံရိပ်တွေက အတော်မြန်မြန်ပြောင်းလဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်... ဒါ့အပြင်တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ထပ်နေတဲ့အတွက် ဘယ်အိတ်မှာ ဘယ်ပစ္စည်းပါတယ်ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး.. ထပ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်း ခွဲခြားသိရှိဖို့က မလွယ်ပါဘူး... ဒါကြောင့် အိတ်တွေကို သင့်တော်တဲ့ အကွာအဝေးမှာထားပြီး စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်...
X-Rays မဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့ ဧရိယာ
X-Rays ပုံရိပ်တစ်ခုရဲ့ အရည်အသွေးဟာ X-Rays ထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ အရင်းအမြစ်ကနေ X-Raysလက်ခံမယ့်အစိတ်အပိုင်းကြားမှာရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုကို ဖောက်ထွင်းသွားတဲ့ X-Rays photons အရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပါတယ်... ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေမှာ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ဖောက်ထွင်းခံရနိုင်စွမ်းတွေ ရှိတဲ့အတွက် အရင်းအမြစ်နဲ့ လက်ခံအစိတ်အပိုင်းကြားမှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းရဲ့ အထူနဲ့ အမျိုးအစားတို့အပေါ်မှာမူတည်ပြီး ပုံရိပ်ရဲ့ အရည်အသွေးတွေ ကွားခြားသွားပါတယ်... ဒါ့အပြင် အရာဝတ္ထုတစ်ခုကနေ စုပ်ယူမခံရတဲ့ X-Rays photon တစ်ခုဟာ နောက်အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ စုပ်ယူခြင်း ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်... ဒါကြောင့် တစ်ဝက်တစ်ပျက်ဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့ ခပ်ထူထူ သတ္တုအလွှာတစ်ခုကနေရရှိတဲ့ X-Raysပုံရိပ်တစ်ခုဟာ မဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့ ခပ်ပါးပါး အလွှာတစ်ခုကနေရရှိတဲ့ ပုံရိပ်နဲ့ တူညီတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်.... X-Raysမဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့ အရာဝတ္ထုနဲ့ ဧရိယာတွေကို ပုံရိပ်မှာ အမည်းရောင်အဖြစ်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်... ထူထဲတဲ့သတ္တုတွေ၊ သလင်းကျောက်တွေ၊ ကင်မရာမှန်လိုမျိုး တစ်ချို့သောမှန်တွေဟာ မဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်... X-Rays မဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့ အိတ်တွေကို လူနဲ့ရှာဖွေစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်... အဲ့ဒီအထဲက မဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို ဖယ်ထုတ်ပြီး X-Rays စက်မှ ထပ်စစ်ဆေးရပါမယ်.... သတိထားရမှာကတော့ လျှို့ဝှက်ထားချင်တဲ့ ပစ္စည်းကို X-Rays မဖောက်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့ နောက်မှာ ထားနိုင်သလို၊ ရှေ့မှာလည်း ထားရှိနိုင်ပါတယ်... မဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့ ဧရိယာနဲ့ တစ်တန်းထဲမှာရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေအကုန်လုံးကို မြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး... သေးငယ်တဲ့ မဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့ ဧရိယာအတွင်းမှာပဲ ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေ အများကြီးထားလို့ရပါတယ်... ဒါကြောင့် မဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့ ဧိရိယာရှိတယ်လို့ သံသယဖြစ်ခဲ့ရင် စေ့စေ့စပ်စပ်ရှာဖို့အရေးကြီးပါတယ်...
အိတ်အများအပြားကို စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ အရောင်အသွေးအမျိုးမျိုး၊ ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ အိတ်တွေကြောင့် ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေ၊ လက်နက်တွေကို ခွဲခြားသိမြင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူပါဘူး... ခရီးသည်တွေသယ်ဆောင်လာတဲ့ ပစ္စည်းတွေ၊ အသေးစားကိရိယာတွေ၊ အဝတ်အစားတွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တဲ့ clutter များကလည်း အများအပြားရှိပါတယ်... ဒီများပြားလှတဲ့ အပြောင်းအလဲများကြောင့် အိတ်ထဲမှာပါတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ခွဲခြားသိမြင်ဖို့ကို ခက်ခဲစေပါတယ်... အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေရဲ့ အရေအတွက်နဲ့ ထားရှိပုံအနေအထား၊ သိပ်သည်းပျံ့နှံ့မှုအနေအထား၊ အိတ်အမျိုးအစားနဲ့ အရွယ်အစား၊ လက်ကိုင်ကွင်းတွေ၊ ကြိုးခေါင်းတွေ၊ ခါးပတ်ကွင်းတွေ၊ ဘီးတွေ၊ သတ္တုဘောင်တွေကြောင့် ပုံရိပ်ဟာ ရှုပ်ထွေးနေပါလိမ့်မယ်... များပြားလှတဲ့ clutter တွေကြောင့် X-Rays ပုံရိပ်တွေဟာ သဏ္ဍာန်တူတွေ၊ ပုံစံကွဲတွေအများအပြားဖြစ်ပြီး အလွန်အမင်းရှုပ်ထွေးနေတတ်ပါတယ်... ပုံရိပ်တွေကို ခွဲခြားပုံဖော်နိုင်ဖို့ X-Rays စက်တွေရဲ့ ပုံရိပ်ဖော်မှုအပိုင်းကို နည်းပညာဆိုင်ရာ မြှင့်တင်မှုတွေပြုလုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်... ဒါမှသာ သာမန်ပစ္စည်းအမြောက်အမြားထဲက ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေ၊ လက်နက်တွေကို သီးခြားဖော်ထုတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်... clutter တွေအရမ်းများနေတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ လူကိုယ်တိုင်ရှာဖွေလိုက်တာက အသင့်တော်ဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ....
အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းကိရိယာတွေ ထည့်ထားတဲ့ အိတ်တွေလည်း အများအပြားရှိပါတယ်... အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းကိရိယာ အစိတ်အပိုင်းတွေ ရှုပ်ထွေးများပြားပေမဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းအလိုက် ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းနဲ့ လက်နက်တွေပါမပါ အထူးဂရုပြု ရှာဖွေသင့်ပါတယ်.... ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေကို တစ်ခုချင်းစီခွဲထုတ်ပြီး စနစ်တကျရှာဖွေသင့်ပါတယ်... အီလက်ထရောနစ်နဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေမှာ လက်နက်နဲ့ ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေ တွဲကပ်ဖုံးကွယ်ထားတတ်ပါတယ်... ဥပမာ- မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်တွေ၊ ဂဏာန်းပေါင်းစက်တွေ၊ ကင်မရာတွေ၊ ရေဒီယိုတွေ၊ နာရီတွေ၊ ကက်စက်ခွေတွေနဲ့၊ ကက်ဆက်တွေဖြစ်ပါတယ်... ဒါတွေမှာ တစ်စုံတစ်ရာ ကြံစည်ပြုလုပ်ထားမှုများရှိလားဆိုတာသေချာရှာဖွေရပါမယ်... X-Rays စက်ကိုအသုံးပြုပြီး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းအလိုက် မသင်္ကာဖွယ်ရာ အစိတ်အပိုင်းတွေ ပါမပါ၊ စွမ်းအင်အပိုတွေသုံးထားမထား၊ organic material တွေပါမပါတို့ကို သေချာစစ်ဆေးရပါမယ်... ဒီပစ္စည်းတွေကို ခလုတ်ဖွင့်ထားခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုလည်း ပိုင်ရှင်ကို မေးမြန်းရပါမယ်...
တစ်ချို့အိတ်တွေရဲ့ အရွယ်အစား၊ အလေးချိန်နဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်တွေကြောင့် X-Raysစက်တွေမှာ မဆံ့ပါဘူး... ဒီလိုအခါမျိုးမှာတော့ ပိုမိုကြီးမားတဲ့ စက်တွေမှာ စစ်ဆေးရင်စစ်ဆေး ဒါမှမဟုတ် လက်နဲ့ပဲရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်.... ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းရှာဖွေခြေရာခံရေးကိရိယာတွေကို အသုံးပြုနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ.... ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ မျက်မြင်နဲ့ ကိုင်တွယ်စမ်းသပ်ရှာဖွေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်.... စစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာ အထက်ပါပစ္စည်းတွေကို ဖြုတ်ပြီး ခေါက်ပြီး စစ်လို့ရမရ ပိုင်ရှင်ကိုမေးမြန်းပြီး စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်.... ဂစ်တာလိုမျိုး ကြီးမားတဲ့ တူရိယာပစ္စည်းအများစုကတော့ X-Rays စက်တွေထဲကို အောင်မြင်စွာထည့်လို့ရတာကို အံ့အားသင့်ဖွယ်တွေ့ရပါတယ်... ပုံမှန်အထူရှိတဲ့ သတ္တုအများစုကို X-Rays စက်နဲ့ ထောက်လှမ်းပြီး ၎င်းတူရိယာတွေအထဲ နဲ့ အနောက်မှာရှိတဲ့ လက်နက်နဲ့ ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေကို ထောက်လှမ်းမှုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်....
ကဲဒီလောက်ဆို X-Raysစက်နဲ့ထောက်လှမ်းရှာဖွေရေးကိစ္စမှာ အတော်အသင့်အဆင်ပြေပြီထင်ပါတယ်... အသေးစိတ်ဖတ်ချင်ရင်တော့ X- Rays Screnner.com (http://www.x-rayscreener.com) မှာသွားရောက်ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်.... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....
Middle IRအပိုင်းထဲဝင်လာတာနဲ့အမျှ အေးမြတဲ့ကြယ်တွေဟာ တဖြည်းဖြည်းမှုန်ဝါးသွားပြီး ပိုမိုအေးမြတဲ့ ဂြိုလ်တွေ၊ ကြယ်တံခွန်တွေနဲ့ ဂြိုလ်သိမ်ဂြိုလ်မွှားတွေဟာ မြင်ကွင်းထဲမှာထင်ရှားလာပါတယ်.... ဂြိုလ်တွေဟာ နေကလာတဲ့အလင်းရောင်ကို စုပ်ယူပြီးပူနွေးလာပါတယ်... ပြီးတော့ အဲ့ဒီအပူတွေကို အနီအောက်ရောင်ခြည်အဖြစ် ပြန်လည်ထုတ်လွှတ်ပါတယ်... ဒီပုံရိပ်တွေဟာ ဂြိုလ်တွေပေါ်ကို နေရောင်ခြည်ကျရောက်ပြီး ပြန်လာလို့မြင်ရတဲ့ပုံနဲ့ ကွဲပြားခြားနားပါတယ်.... ကျွန်တော်တို့နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ ဂြိုလ်တွေရဲ့ အပူချိန်ဟာ 53 ကနေ 573 Degree Kelvin အတွင်းးရှိပါတယ်.... ဒီအပူချိန်အတွင်းမှာရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေဟာ Middle IR အပိုင်းအခြားကို အများဆုံးထုတ်လွှတ်ကြပါတယ်.... ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမြေကြီးကိုယ်တိုင် 10 မိုက်ခရိုမီတာ လှိုင်းအလျားရှိတဲ့ အနီအောက်ရောင်ခြည်ကို အများအပြားထုတ်လွှတ်လျက်ရှိပါတယ်... ဂြိုလ်သိမ်ဂြိုလ်မွှားတွေဟာလည်း အထက်ပါပမာဏအတွင်း လှိုင်းအလျားရှိတဲ့ အနီအောက်ရောင်ခြည်များကို ထုတ်လွှတ်တဲ့အတွက် မှောင်မိုက်နေတဲ့ ဂြိုလ်သိမ်ဂြိုလ်မွှားတွေကို ရှာဖွေတဲ့နေရာမှာ များစွာထိရောက် အသုံးဝင်ပါတယ်.... အနီအောက်ရောင်ခြည်အချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပြီး အဲ့ဒီဂြိုလ်သိမ်ဂြိုလ်မွှားတွေရဲ့ ဂြိုလ်မျက်နှာပြင်အနေအထား၊ အချင်းဝက်စတာတွေကို တိုင်းတာရရှိနိုင်ပါတယ်....
Far IR အတွင်းရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ ကြယ်တွေအားလုံးကို မမြင်ရတော့ပါဘူး... ကြယ်တွေအစား အလွန်အေးမြတဲ့ (140 Kelvin နဲ့အောက်ရှိတဲ့) အရာဝတ္ထုတွေကိုပဲ တွေ့မြင်ရပါတယ်... ကျွန်တော်တို့ Galaxy အတွင်းနဲ့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ကြီးမားပြီး အေးမြတဲ့ ဓာတ်ငွေ့နဲ့ ဖုန်မှုန့် တိမ်တိုက်ကြီးတွေကိုFar IR မြင်ကွင်းမှာ ထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရပါတယ်... ဒီတိမ်တိုက်တစ်ချို့ထဲမှာ ကြယ်အသစ်တွေဟာ ဖွဲ့စည်းစပြုနေတတ်ပါတယ်... ဒီလိုဖွဲ့စည်းစ ကြယ်တွေကို Far IR လေ့လာစောင့်ကြည့်မှုတွေကနေ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်.... ကြယ်တစ်လုံးအဖြစ် မျက်မြင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်၊ အပူတွေစတင် ထုတ်လွှင့်မှုပြုလုပ်တဲ့ချိန် တွေမတိုင်ခင်အချိန်တော်တော်ကြာကတည်းက တွေ့မြင်သိရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်....
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း အလုပ်ကို ဦးစားပေးနေရတာနဲ့ ဆွေးနွေးမှုလေးတွေ အဆက်ပြတ်သွားတယ်… ကဲ အခု အနီအောက်ရောင်ခြည်ပုံရိပ်တွေကို လေ့လာပြီး ဆွေးနွေးကြည့်ကြရအောင်ဗျာ…
ပထမဆုံးပုံကတော့ အနီအောက်ရောင်ခြည်ကင်မရာနဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးကို မြင်ရတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်… ဒီပုံမှာဆိုရင် လေထုအတွင်းမှာရှိတဲ့ ရေငွေ့တွေက ဖြာထွက်လာတဲ့ အနီအောက်ရောင်ခြည်တွေကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်…. တောက်ပနေတဲ့ နေရာများမှာတော့ ရေငွေ့အမြောက်အများရှိပြီး မှိန်နေ/မှောင်နေတဲ့ အပိုင်းများမှာတော့ ခြောက်သွေ့နေမှာဖြစ်ပါတယ်…. အနီအောက်ရောင်ခြည်ပုံဖော်ခြင်းဟာ ကမ္ဘာမြေကြီးကို လေ့လာရာမှာ နည်းလမ်းပေါင်းအမြောက်အမြားနဲ့ အသုံးဝင် အကျိုးပြုပါတယ်… ဒီနည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီး ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာ မြေကမ္ဘာရဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ အချက်အလက်တွေများစွာကို ရရှိနိုင်ပါတယ်….
ဒုတိယပုံကတော့ ရေနွေးပူတွေထည့်ထားတဲ့ ခွက်နှစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်…. ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ အတိုင်း အနီအောက်ရောင်ခြည်ဆိုတာကလည်း အပူထုတ်လွှတ်ဖြာထွက်ရာ ပင်မရင်းမြစ်ကြီးပေကိုး….. ဒါကြောင့် အတောက်ပဆုံးဧရိယာဟာ အပူနွေးဆုံးဖြစ်ပြီး ရေနွေးကအပူတွေဟာ ခွက်တစ်ခုလုံးကို ဘယ်လိုဖြာထွက်တောက်ပစေတယ်ဆိုတာကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်…. ဒါ့အပြင် ခွက်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ထွင်းဖောက်မြင်နိုင်တာကိုလည်း သတိပြုလေ့လာနိုင်ပါတယ်… ခွက်တွေရဲ့ အောက်မှာရှိတဲ့ စားပွဲပေါ်မှာလည်း အနီအောက်ရောင်ခြည်ကြောင့် တောက်ပနေတာကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်… တစ်ချို့ကတော့ ခွက်ကနေစီးဆင်းလာတဲ့ အပူကြောင့် မြင်ရတာဖြစ်ပြီး တစ်ချို့ကတော့ အနီအောက်ရောင်ခြည် ရောင်ပြန်ဟပ်တာကို တွေ့မြင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်…..
တတိယပုံကတော့ အမှောင်ထဲက သမင်တွေကို တွေ့မြင်ရတဲ့ ပုံဖြစ်ပါတယ်… အနီအောက်ရောင်ခြည်ကင်မရာတွေဟာ သွေးနွေးသတ္တဝါတွေဆီက ဖြာထွက်လာတဲ့ အပူကတစ်ဆင့် သတ္တဝါတွေကို တွေ့မြင်ထောက်လှမ်းနိုင်ပါတယ်… ဒါကြောင့် သာမန်မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ သတ္တဝါတွေကို ညဘက်မှာပါ ထောက်လှမ်းရှာဖွေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်….
ဒီပုံကတော့ ဒဏ်ရာရထားတဲ့ခြေထောက် (ညာဘက်ခြမ်း/ဘယ်ခြေထောက်) နဲ့ ဒဏ်ရာမရတဲ့ ခြေထောက်အကောင်း (ဘယ်ဘက်ခြမ်း/ညာခြေထောက်) တို့ကို အနီအောက်ရောင်ခြည်နဲ့ ကြည့်ရှုတဲ့အခါတွှေ့မြင်ရတဲ့ ပုံဖြစ်ပါတယ်…. အဖြူရောင်နဲ့ အတောင်ပဆုံးအပိုင်းတွေဟာ ဒဏ်ရာကြောင့်သွေးစီးဆင်းမှုများပြီး ပူနွေးနေတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်… ဂရုတစိုက်ကြည့်ရင် အဲ့ဒီလူဟာ ကောင်းတဲ့ခြေထောက်အပေါ် အားပြုပြီးရပ်နေတာကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်…. ဘာကိုကြည့်ပြောနိုင်လဲဆိုတော့ ဘယ်ဘက်ခြမ်း (ညာခြေထောက်) ရဲ့ ခြေကျင်းဝတ်မှာ သွေးစီးဆင်းမှုကြောင့် ပူနွေးနေတဲ့ အနီရောင် ဧရိယာကိုတွေ့မြင်နေရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်…. ဆေးပညာနယ်ပယ်မှာ အနီအောက်ရောင်ခြည်ပုံဖော်ခြင်းကို အပေါ့စားတစ်သျှူးဒဏ်ရာရရှိမှုနဲ့ သွေးလှည့်ပတ်စီးဆင်းမှုပြဿနာတွေကို ထောက်လှမ်းဖို့အသုံးပြုကြပါတယ်… တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုခြင်းမှာလည်း အနီအောက်ရောင်ခြည်ပုံဖော်စနစ်တွေကို အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်….
အခုနောက်ပိုင်း လေဆိပ်တွေမှာ ခရီးသယ်တို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကို လုံခြုံရေးအရစက်ဖြင့်စစ်ဆေးရာတွင် X-Rays သုံးစွဲတာဟုတ်မဟုတ် မရှင်းလင်းတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
လက်ရှိစစ်ဆေးတဲ့ကရိယာတွေက ခရီးသယ်ရဲ့ ကင်မရာထဲက ဖလင်လိပ်တွေအပေါ် အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေဘူး၊ ကျမ်းမာရေးထိခိုက်မှာလည်းစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောတွေ ကြားသိနေရလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိပ်ကမ်းအချို့မှာတော့ ကွန်တိန်နာကြီးတွေကို X-Rays ဖြင့်အပိုင်းလိုက်ရိုက်ကူး စစ်ဆေးပြီးမှ တင်သွင်းခွင့်ပြုတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒီလိုနေရာတွေမှာတော့ ဓါတ်ရောင်ခြည်အန္တရယ်ကို အုတ်တံတိုင်းနံရံများတည်ဆောက်ကာကွယ်ပေးကြရတဲ့အပြင် ရောင်ခြည်ထွက်ပေါ်နေစဉ် အနီးတစ်ဝိုက်မှာ လူသူဖြတ်သန်းမှုမရှိရအောင် သတိပေးခြင်း/တားဆီးကာကွယ်ကန့်သတ်ခြင်း တို့ပြုပေးထားတယ်လို့ကြားဖူးတာပါရှင်။
X-Rays ဓါတ်ရောင်ခြည်ဟာ ခဲသတ္တုပြားများကို ဖေါက်ထွင်းနိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့လည်းကြားဖူးပါတယ်။
Iras-Araki-Alcock ဆိုတဲ့ ကြယ်တံခွန်ကို Infrared Astronomical Satellite (IRAS) ကနေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်…. ဒီအနီအောက်ရောင်ခြည်ပုံရိပ်မှာတော့ ကြယ်တံခွန်ရဲ့ နောက်မြီးမှာ ပူနွေးတဲ့ဖုန်မှုန့်တွေ သွယ်တန်းလိုက်ပါနေတာကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်…. တောက်ပနေတဲ့ အနီရောင်အပိုင်းကတော့ ကြယ်တံခွန်ရဲ့ ဗဟိုချက်မ (Nucleus) နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်….. နောက်မြီးကနေဖြာထွက်တဲ့ အနီအောက်ရောင်ခြည်တွေကတော့ အားနည်းသွားပြီး အဝါရောင်၊ အပြာရောင်များအဖြစ် မှေးမှိန်သွားတာကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်….. ကြယ်တံခွန်မှာပါရှိတဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေဟာ နေကလာတဲ့ အလင်းရောင်အများစုကို ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သလို အလင်းရောင်အချို့ကိုလည်း စုပ်ယူနိုင်ပါတယ်…. ဒီနည်းနဲ့ ဒီဖုန်မှုန့်တွေဟာပူနွေးလာပြီး ကြယ်တံခွန်ရဲ့ အနီအောက်ရောင်ခြည်ပုံရိပ်မှာ ခပ်မှိန်မှိန်လေးတောက်ပလာတာကို တွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်…
ဒီပုံကတော့ ခြေရာထင်ကျန်နေတဲ့ပုံကို အနီအောက်ရောင်ခြည်ပုံရိပ်အနေနဲ့မြင်ရတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်… ပုံမှာပါတဲ့သူဟာ ဖိနပ်မပါဘဲ အဝေးကိုဆက်လျှောက်သွားပါတယ်…. အဲ့လိုလျှောက်သွားတဲ့အခါမှာ ခြေထောက်ကအပူတွေဟာ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို စီးကူးသွားပြီး အနီအောက်ရောင်ခြည်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ခြေရာအဖြစ်တွေ့မြင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်… ဒီခြေရာတွေဟာ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကအပူတွေ ပျံ့နှံ့သွားတာနဲ့အမျှ တဖြည်းဖြည်း မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်….
ကြယ်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ ကြီးမားကျယ်ပြောတဲ့ အာကာသဟင်းလင်းပြင်ကြီးထဲမှာ ဘာမှမရှိဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့ တစ်ခါတစ်လေ စဉ်းစားမိကောင်း စဉ်းစားမိကြပါလိမ့်မယ်…. တကယ်တော့ ဒီအာကာသလေဟာနယ်ကြီးဟာ မြောက်မြားလှတဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေ၊ ဓာတ်ငွေ့တွေနဲ့ ပြည့်သိပ်နေတာပါ…. ဒီအနီအောက်ရောင်ခြည်ပုံရိပ်ကတော့ ဖုန်မှုန့်အလွှာတွေက အနီးအနားမှာရှိတဲ့ ကြယ်တွေဆီက ဖြာထွက်လာတဲ့ ရောင်စဉ်တွေကို စုပ်ယူပြီး ပူနွေးလာတဲ့အတွက် အနီအောက်ရောင်ခြည်မြင်ကွင်းမှာ တောက်ပလာတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်… ဒီလို ကြယ်တွေကြားမှာရှိတဲ့ ဖုန်မှုန့်နဲ့ ဓာတ်ငွေ့အလွှာတွေကို “interstellar cirrus” လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်….
ဒီပုံကတော့ ကလေးတစ်ယောက် ပုတ်သင်ညိုတစ်ကောင်ကို လက်မှာကိုင်ထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်…. အိမ်မြှောင်တို့ ပုတ်သင်တို့ဟာ တွားသွားသတ္တဝါတွေဖြစ်ပြီး သွေးအေးသတ္တဝါလည်းဖြစ်ကြပါတယ်…. သွေးအေးသတ္တဝါဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ အပူချိန်ဟာ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်အတိုင်းဖြစ်ပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင်က အပူထုတ်လွှတ်မှုမရှိကြပါဘူး…. လူတွေကတော့ သွေးနွေးသတ္တဝါဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်တိုင်အပူထုတ်လွှတ်ပြီး ပူနွေးအောင်ပြုလုပ်နိုင်ကြပါတယ်…. ပုံမှာဆိုရင် လူရဲ့ နွေးထွေးတဲ့ လက်တွေနဲ့ ပုတ်သင်ရဲ့ အေးမြတဲ့ ကိုယ်ကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်…. ဒါ့အပြင် လက်နဲ့ ပုတ်သင်ဆီက အနီအောက်ရောင်ခြည်တွေဟာ အောက်ခံစားပွဲပေါ်မှာ ရောင်ပြန်ဟပ်နေမှုကိုလည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်….
ဒီပုံကတော့ လမ်းရဲ့ပွတ်အားကြောင့် ပူပြင်းနေတဲ့ ကားတာယာကို အနီအောက်ရောင်ခြည်ပုံရိပ်အနေနဲ့ တွေ့မြင်ရတာပါ…. လမ်းနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့ တာယာရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေဟာ ပိုမိုပူပြင်းတဲ့အတွက် အနီအောက်ရောင်ခြည်ပုံရိပ်မှာ အလင်းရောင်ပိုတောက်နေတာကို သတိပြုနိုင်ပါတယ်…..
ဒီပုံကတော့ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အပူချိန်ကို ဖော်ပြတဲ့ အနီအောက်ရောင်ခြည်မြေပုံဖြစ်ပါတယ်…. အနီအောက်ရောင်ခြည် ဂြိုလ်တုတွေဟာ သမုဒရာမျက်နှာပြင် အပူချိန်ကို တိုင်းတာခြေရာခံဖို့ အသုံးပြုပါတယ်….ဒီနည်းအားဖြင့် အယ်နီညို လိုမျိုးမုန်တိုင်းတွေကို ခန့်မှန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်….. ဒါ့အပြင် ကမ္ဘာ့မြေပြင်တစ်လျှောက် အပူစီးကြောင်းတွေ၊ အအေးစီးကြောင်းတွေ ဘယ်လို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းကြတယ်ဆိုတာလည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်….. ဒီလို ပင်လယ်ရေပြင်ရဲ့ အပူချိန်ကိုပြတဲ့ အနီအောက်ရောင်ခြည်မြေပုံတွေကို ငါးဖမ်းသမားတွေကလည်း ဘယ်အပူအချိန်မှာ ဘယ်လိုငါးမျိုးတွေနေထိုင်ကျက်စားကြတယ်ဆိုတာကို အခြေခံပြီး ခန့်မှန်းဖမ်းယူမှုတွေပြုလုပ်ကြပါတယ်….
ဒါကတော့ မြင်းကျားတစ်ကောင်ရဲ့ အနီအောက်ရောင်ခြည်ပုံရိပ်ဖြစ်ပါတယ်…. ဒီလိုအနီအောက်ရောင်ခြည်ပုံရိပ်မှာလည်း မြင်းကျားရဲ့ အစင်းကျားတွေကို တွေ့မြင်နေရတုန်းပဲဆိုတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ…. တကယ်တော့ တောက်ပနေတဲ့ အစင်းတွေက မြင်းကျားရဲ့ အမည်းစင်းတွေဖြစ်ပြီး မှိန်နေ/မှောင်နေတာကတော့ အဖြူစင်းနေရာတွေဖြစ်ပါတယ်….. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အမည်းရောင်ဟာ အဖြူထက် အပူကိုစုပ်ယူမှုအားကောင်းတဲ့အတွက် ပိုမိုပူပြင်းပါတယ်…. နေရောင်အောက်မှာ အမည်းစင်းတွေဟာ ပိုမိုပူပြင်းပြီး အပူပိုမိုထုတ်လွှတ်တဲ့အတွက် အခုလို အရောင်တောက်နေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်…..
ဒါကတော့ အရည်ပျော်နေတဲ့ ရေခဲတုံးကိုရေထဲ စိမ်ထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်….. ဒီပုံမှာဆိုရင် ခရမ်းရောင်မြင်နေရတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဟာ အအေးမြဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး အနီရောင်အဖြစ်မြင်နေရတဲ့ အစိတ်အပိုင်တွေကတော့ အပူပြင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်…. အရည်ပျော်နေတဲ့ ရေခဲတုံးဆီက ဝေးကွာလာလေလေ ရေတွေရဲ့ အပူချိန်က မြင့်လာလေလေဆိုတာကို တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်….. ရေခဲတုံးလိုအေးမြတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကအစ အနီအောက်ရောင်ခြည် ဖြာထွက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကို ထင်ရှားစွားလေ့လာနိုင်ပါတယ်….
အခုလိုမေးခွန်းလေးတွေနဲ့ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ မအေရာကိုလည်း အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်….. ဒီလိုဆွေးနွေးမေးမြန်းတဲ့သူတွေရှိမှလည်း post တွေက အသက်ဝင်နေမှာလေ… ပြီးတော့ မတူညီတဲ့ ရှုထောင့်အမြင်တွေက ဆွေးနွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း ဆွေးနွေးမှုတွေကို ပိုပြည့်စုံစေပါတယ်…. ကျွန်တော်လည်း IR အကြောင်းကို လတ်တလောဖတ်ဖြစ်နေတာနဲ့ IR နဲ့ပတ်သက်တာတွေဘက် ပိုအားသန်နေတယ်…… အခု မအေရာသိချင်တတွေကို တတ်နိုင်သလောက်လေးဆွေးနွေးကြည့်လိုက်ကြရအောင်….
လေဆိပ်တွေမှာ လုံခြုံရေးအတွက် စစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ စက်ကိရိယာတွေထဲမှာ X-Rays ကို အသုံးပြုစစ်ဆေးတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်… ဒါပေမဲ့ X-Raysတစ်ခုထဲတော့မဟုတ်ပါဘူး…. မျက်စိထဲမြင်ကြည့်လိုက်ရအောင်….. luggage တွေ၊ baggage တွေကို စစ်ဆေးဖို့အတွက် အသုံးပြုတာကတော့ အများအားဖြင့် X-Rays စက်တွေပါ…. တစ်ချို့နေရာတွေမှာတော့ T-Rays (Tarahetz Radiation) ကိုလည်းအသုံးပြုတယ်လို့သိရပါတယ်….. ပြီးတော့ hand carry တွေကို စစ်ဆေးတဲ့စက်လည်း ရှိပါတယ်…. ဒါလည်း X-Rays စက်ပါပဲ….. နောက်တစ်ခုက လူဝင်ရတဲ့ မုခ်ဦးလိုအပေါက်လေးရှိတယ်…. အဲ့ဒါကတော့ Archway Metal Detectors (AMDs) တွေဖြစ်ပါတယ်…. ဒါတွေကို တခြားအဆောက်အဦ အဝင်ပေါက်တွေမှာလည်းအသုံးပြုတာတွေ့ရပါတယ်….
Archway Metal Detectors (AMDs)နဲ့ စစ်ဆေးခြင်း
နောက်တစ်ခုကတော့ လက်ကိုင်စစ်ဆေးတဲ့ ကိရိယာတွေပါ…. ခရီးသည်တွေရဲ့ကိုယ်ကို အပြင်ကနေစမ်းသပ်စစ်ဆေးတဲ့ကိရိယာပါ…. ဒါကတော့ Hand Held Metal Detectors (HHMDs) တွေဖြစ်ပါတယ်…. ဒါကိုတော့ shopping center တွေ၊ ဈေးတွေမှာတောင် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်…. Metal Detector တွေမှာ အသုံးပြုတာကတော့ Radio Wave ဖြစ်ပါတယ်….. Metal Detector ကတော့ Ground Penetrating Radar နဲ့ သဘောတရား လုပ်ဆောင်ပုံတူပါတယ်…. Detector ကနေ ပထမဆုံး လှိုင်းတွေကို ထုတ်လွှင့်လိုက်မယ်…. ထုတ်လွှင့်တဲ့ လှိုင်းတွေကသတ္တုမျက်နှာပြင်ကို ထိရိုက်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါ ပြန်လည်ဖမ်းယူပြီး အချက်ပြတဲ့ စနစ်ကိုအသုံးပြုထားတာပါ…… မြန်မာပြည်ကထုတ်လုပ်တဲ့ Metal Detector တစ်ခုမှာတော့ 7kHz ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ frequency ကိုအသုံးပြုထားတာကို လေ့လာမှတ်သားဖူးပါတယ်…..
Hand Held Metal Detectors (HHMDs)နဲ့ စစ်ဆေးခြင်း
ဒါကတော့ Hand Carry ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့ X-Rays Machine
လေဆိပ်တွေမှာစစ်ဆေးတဲ့ပုံစံကတော့ လေယာဉ်ဝမ်းဗိုက်က သယ်မယ့်ပစ္စည်းတွေကို X-Rays စက်နဲ့ သူ့ဘာသာစစ်ဆေးသွားပါတယ်…. ဒါကြောင့်လူကို ထိခိုက်ဖို့စိတ်မပူရပါဘူး….. ဖလင်လိပ်တွေအပေါ် X-Rays ရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတော့ ကျွန်တော်မသိပါဘူး….. လူကိုစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာတော့ AMDs တွေထဲကို အရင်ဖြတ်စေပြီး စစ်ဆေးပါတယ်…. မသင်္ကာစရာတစ်ခုခုရှိရင် HHMDs တွေနဲ့ ထပ်ပြီးစစ်ဆေးရှာဖွေပါတယ်….. လက်ကနေသယ်လာတဲ့ Hand Carry ပစ္စည်းတွေကိုတော့ X-Rays Machine ထဲကို ထည့်ပြီး စစ်ဆေးပါတယ်….. AMDs ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ HHMDs ကနေပဲဖြစ်ဖြစ် သတ္တုပစ္စည်းတစ်ခုခုပါရှိကြောင်း (ဥပမာ-ခါးပတ်ခေါင်း၊ နာရီ) အချက်ပြလာရင်တော့ ဒီပစ္စည်းတွေကို ချွတ်ပြီး X-Raysစက်ထဲထည့်ပြီးထပ်မံစစ်ဆေးပါတယ်…. အများအားဖြင့်တော့ အနွေးထည်တွေ၊ ပိုက်ဆံအိတ်တွေနဲ့ တခြားပစ္စည်းတွေကို ချွတ်ပြီး X-Raysစက်ထဲကိုအရင်ထည့်စေပါတယ်….. တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ လူတွေကို AMDs နဲ့ HHMDs တွေနဲ့ စစ်ဆေးပါတယ်…. တစ်ဘက်ကိုရောက်မှ ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်ပြန်ယူစေပါတယ်…. ဒါတွေကလည်း အများစုကသိပြီးသားပါပဲ…. စစ်ဆေးတဲ့ပုံစံတွေကို မျက်စိထဲမြင်စေချင်လို့ ပြန်ပြောပြနေတာပါ…… ပိုပြီးလုံခြုံရေးတင်းကြပ်တဲ့ လေဆိပ်တွေမှာတော့ ခေတ်သစ်ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုနေကြတဲ့ အရည်နဲ့ ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေကို ထိထိရောက်ရောက်ရှာဖွေစစ်ဆေးနိုင်အောင်လို့ microwave, acoustic, ultrasonic နဲ့ infrared စတဲ့နည်းပညာတွေကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုထားကြပါတယ်…. လေဆိပ်အများစုမှာတော့ ငွေကြေးကုန်ကျသုံးစွဲနိုင်မှု ကန့်သတ်ချက်အရ X-Rays Machine တွေကိုပဲ အသုံးပြုကြပါတယ်…. ဒါကြောင့် X-Rays ကိုအသုံးပြုပြီး စစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာ လူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကို တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုမရှိတဲ့အတွက် လူကိုထိခိုက်နိုင်မှု အတော်နည်းပါးပါတယ်…. X-Rays Machine တွေကနေ X-Rays ရောင်ခြည်ဖြာထွက်ပျံ့နှံ့မှုမရှိအောင် ဘယ်လိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်လည်း အတိအကျမသိပါဘူး…. ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီစက်တွေအနီးမှာပဲ စစ်ဆေးတဲ့သူတွေ၊ ခရီးသည်တွေ သွားလာလှုပ်ရှားလုပ်ကိုင်နေနိုင်တဲ့အတွက် ဒီစက်ထဲကနေ အပြင်ကိုဖြာထွက်ပျံ့နှံ့မှုမရှိအောင် ထိန်းချုပ်ထားမှုရှိတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်….. နောက်တစ်ခုကတော့ ကွန်တိန်နာတွေကို စစ်ဆေးတဲ့ စနစ်တွေအကြောင်းပါ…. အဲ့လိုစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာလည်း X-Raysကိုအသုံးပြုစစ်ဆေးတာရှိသလို Gamma Rays ကို အသုံးပြုစစ်ဆေးတာလည်းရှိပါတယ်….. ဒီလိုစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာတော့ ထူထဲတဲ့ သတ္တုနံရံတွေကို ဖြတ်ပြီး ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်အောင်လို့ စွမ်းအားမြင့်တဲ့ EM တွေကို အသုံးပြုရပါတယ်….
အိတ်တွေစစ်ဆေးတဲ့ X-Rays Machine
EM တွေကို အပေါ်မှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတိုင်း frequency, wavelength, velocity နဲ့ energy ဆိုပြီး အမျိုးမျိုးတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်….. EM အားလုံးရဲ့ velocity ကတော့ အားလုံးသိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်း အလင်းရဲ့ အလျင်နဲ့ အတူတူဖြစ်ပါတယ်…. Frequency နဲ့ wavelength ကတော့ ပြောင်းပြန်အချိုးကျနေပါတယ်…. ဒါလည်း သူ့အပိုင်းအခြားနဲ့သူ ပုံမှန်ပါပဲ…. Energy ကတော့ ထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့ အရင်းအမြစ်ပေါ်မူတည်ပြီး ကွားခြားပါတယ်…. အများအားဖြင့်တော့ frequency မြင့်လေလေ energy ပိုများလေလေပါပဲ…. Energy ပိုများရင် ဖောက်ထွင်းနိုင်စွမ်းလည်းပိုများပါတယ်…. ဒါကြောင့် သင်္ဘောဆိပ်တွေမှာ စစ်ဆေးတဲ့အခါ အသုံးပြုတဲ့ X-Raysရဲ့ စွမ်းအင်နဲ့ လေဆိပ်မှာ အသုံးပြုတဲ့ X-Rays ရဲ့ စွမ်းအင်ဟာ အသုံးပြုမယ့် လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးကွာခြားမှုရှိပါတယ်…. ပိုမိုထူထဲတဲ့ နံရံတွေကို ဖြတ်သန်းသွားနိုင်ဖို့အတွက် စွမ်းအင်ပိုမြင့်တဲ့ X-Rays တွေကို အသုံးပြုရပါတယ်…. အဲ့ဒီအတွက် လူကိုထိခိုက်နိုင်မှုလည်း ပိုများပါတယ်…. ဒါကြောင့် အုတ်နံရံတွေပြုလုပ်ကာကွယ်ခြင်း၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလူတွေမလာအောင် တားဆီးသတိပေးတားခြင်း တို့ကို လုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်….. အောက်ကပုံကတော့ X-Rays စက်နဲ့ ကွန်တိန်နာတစ်ခုကို စစ်ဆေးပုံဖော်ထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်…..
ကဲ….X-Rays ရဲ့ ဖောက်ထွင်းနိုင်မှုစွမ်းအားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကို ထပ်ပြီးလေ့လာလိုက်ကြရအောင်…… X-Rays နဲ့ ဖောက်ထွင်းပုံဖော်တဲ့နေရာမှာ အရေးကြီးတဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်…. ပထမအချက်ကတော့ X-Rays ရဲ့ စွမ်းအားပါ….. အဲ့ဒီစွမ်းအားကတော့ ထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ အရင်းအမြစ်ပေါ်မူတည်ပါတယ်…. အဲ့ဒီအရင်းအမြစ်ကိုလည်း လုံလောက်တဲ့စွမ်းအားရရှိအောင် ရွေးချယ်အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်…. ဒါမှ ငွေကြေးအကုန်အကျ၊ အရွယ်အစား၊ လိုအပ်တဲ့အကျယ်အဝန်း စတာတွေကို တွက်ချက်ချိန်ဆနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်…. နောက်တစ်ချက်ကတော့ ထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ X-Rays ဟာ သတ္တုတွေကို ဖောက်ထွက်ရိုက်ခတ်ပြီး ပြန်လာတဲ့အခါမှာ ဖမ်းယူပုံဖော်တဲ့ Detector ရဲ့ စွမ်းရည်ပါ….. ဒီအချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီး….. ပုံဖော်မှုစွမ်းရည်ကလည်း ကွားခြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်….. ဖောက်ထွင်းမှုသက်သက်ကိုပဲ လေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ X-Rays ရဲ့ စွမ်းအင်နဲ့ ဖောက်ထွင်းခံအရာဝတ္ထုရဲ့ အမျိုးအစားတို့ကို ကြည့်ရပါမယ်…… X-Rays ရဲ့ စွမ်းအင်နဲ့ ဖောက်ထွင်းနိုင်မှုတွေကို အောက်ကဇယားမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်…..
ပထမဆုံးအနေနဲ့ အသုံးပြုတဲ့ X-Rays ထုတ်လုပ်မှုကတော့ Vacuum Tube နည်းပညာပါပဲ…. ဒီနည်းပညာကို အခုအချိန်အထိ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ စက်ရုံထုတ်ကုန်စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ လေယာဉ်ကွင်းမှာ အိတ်တွေစစ်ဆေးဖို့ အသုံးပြုနေတုန်းပါပဲ…. အခုနောက်ပိုင်း ခေတ်ပေါ်နည်းပညာတွေအသုံးပြုလာခဲ့တဲ့တိုင်အောင် ဒီနည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး ထုတ်လုပ်မှုဟာ ကန့်သတ်ချက်တွေရှိနေဆဲပါပဲ….. စွမ်းအင်အနေနဲ့ 450KeV ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ X-Rays တွေကိုသာ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်….. ဒီစွမ်းအင်လောက်ကတော့ 100mm ထုရဲ့အောက်ရှိတဲ့ သံမဏိ (steel) ကိုသာ ဖောက်ထွင်းနိုင်ပါတယ်…. ပိုမိုထိရောက်ကောင်းမွန်တဲ့ X-Rays ထုတ်လုပ်ရေး နည်းပညာကတော့ Linear Accelerators လို့ခေါ်တဲ့ Linacs ပဲဖြစ်ပါတယ်….. ဒီနည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ X-Rays တွေဟာ 9MeV အထိစွမ်းအင်ရှိပြီး 400mm ထက်ထူတဲ့ သံမဏိကို ဖောက်ထွင်းနိုင်ပါတယ်….. ရေနဲ့ သံမဏိတို့ကို ဖောက်ထွင်းနိုင်မှုပေါ်မူတည်ပြီး အသုံးပြုမှုတစ်ခုအတွက် X-Rays စွမ်းအင်ဘယ်လောက်လိုမယ်ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်….. အပေါ်ကဇယားကတော့ စွမ်းအင်အမျိုးမျိုးပေါ်မူတည်ပြီး ရေနဲ့ သံမဏိတို့ကို အများဆုံးဖောက်ထွင်းနိုင်မှုကို ဖော်ပြထားပါတယ်….. စွမ်းအင်ပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှ အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေရဲ့ X-Rays ကိုစုပ်ယူမှုကလည်း ကွားခြားသွားပါတယ်…. ဒါကလည်း ဖောက်ထွင်းနိုင်မှုစွမ်းအားအချိုး (ratio of penetration power) ပြောင်းလဲမှုအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်…. ဒီအချိုးကတော့ စွမ်းအင်တစ်ခုမှာ ရေကိုဖောက်ထွင်းနိုင်မှုနဲ့ သံမဏိကို ဖောက်ထွင်းနိုင်မှုတို့ရဲ့ အချိုးပဲဖြစ်ပါတယ်…..
ကုန်တင်ပစ္စည်းစစ်ဆေးမှုစနစ်တွေမှာ အများအားဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ဈေးနှုန်းသင့်တင့်မျှတမှုရှိအောင် Linacs နည်းပညာနဲ့ 3MeV ကနေ 6MeV အတွင်းရှိတဲ့ X-Rays တွေကို ထုတ်လုပ်အသုံးပြုကြတယ်လို့ သိရပါတယ်…. 2MeV အောက်ရှိတဲ့ X-Raysတွေကတော့ ကြီးမားထူထဲတဲ့ ကွန်တိန်နာတွေစစ်ဆေးဖို့အတွက် အဆင်မပြေပါဘူး….. 9MeV ထက်စွမ်းအင်ပိုတဲ့ X-Raysကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ အကာအကွယ်တွေသေချာပြုလုပ်ဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်…. ဒီစွမ်းအင်ဟာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ neutrons တွေကို ထုတ်လွှတ်ပါတယ်…. ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ X-Rays ရဲ့ ဖောက်ထွင်းနိုင်မှုစွမ်းအားနဲ့ အသုံးပြုမှုတွေအပေါ် အထိုက်အလျောက် တီးခေါက်မိပြီလို့ယူဆပါတယ်…. X-Rays က ခဲသတ္တုကို ဖောက်နိုင်မဖောက်နိုင်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ ကျွန်တော်လည်း မသိပါဘူး….. သိတဲ့သူများရှိရင်လည်း ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပေးကြပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်…. အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်…..